July 2012 | ကမ်းလက်
in ပြုံးစိစိ, လှည့်ကြည့်မိတဲ့ ထောင့်ချိုးများ, ခေတ်သစ်ပုံပြင် - on 7/31/2012 - No comments
ဆရာဝန် နဲ့ ရှေ့နေတို့ ပါတီတစ်ခုမှာ ဆုံရင်း စကားစမြည် ပြောနေကြတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ လူတွေက ဆရာဝန်ဆီ လာလာပြီး ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေ မေးကြ၊
ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်တွေ လာတောင်းကြ ဆိုတော့ စကားဖြောင့်ဖြောင့် မပြောရဘူး။
ဆရာဝန် သတိထားမိတာက ရှေ့နေဆီကို ဥပဒေရပ် ဆိုင်ရာ
အကြံဉာဏ်တောင်းသူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။
"ရုံးချိန်မဟုတ်ဘဲ ဥပဒေရပ် ဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်လာတောင်းရင် ခင်ဗျား ဘယ်လိုလုပ်လဲ"
"အကြံဉာဏ် ပေးလိုက်တာပေါ့။ နောက်မှ အကြံပေးခ ဘေ ( Bill ) ပို့ လိုက်တယ်"
ပါတီပြီးလို့ နှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာ ဆရာဝန်ရဲ့ စာတိုက်ပုံးထဲ စာတစ်ဆောင် ရောက်နေတယ်။
စာက " ဒေါက်တာ၊ ပါတီမှာတွေ့စဉ် လူကြီးမင်း တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ အကြံပေးခ" တဲ့။
in Mr Jam, ဇင်ဝေသော် - on 7/31/2012 - No comments
တံခါးပွင့်လာပြီး အထဲကိုဝင်ပါ။ ခလုပ်ကို နှိပ်။
ဒီကိစ္စက သိပ်ပြီးလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ လော်ဘီကို ကမ္ဘာဦးကျောက်ခေတ်လူသားတွေနဲ့အတူ မျှဝေရင်း ဓာတ်လှေကား သုံးစွဲနေရပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားနားကိုရောက်ရင်-
၁။ အပေါ်ပြထားတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး သူတို့ဘယ်အထပ်ကို သွားချင်တယ်ဆိုတာ ပြောကြတယ်။ ပြီးရင် အဆင်းကိုပြထားတဲ့ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး သူတို့ကို လာခေါ်ဖို့ပြောကြတယ်။
၂။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို စက္ကန့်နဲ့အမျှ ထပ်တလဲလဲလုပ်ကြတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဓာတ်လှေကား ပိုမြန်မြန်ရောက်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြလို့။
၃။ ဓာတ်လှေကားရှေ့ကို နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ လူတိုင်းကလည်း ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ကြတယ်။ ဓာတ်လှေကားစောင့်နေတဲ့လူအုပ် ပိုပြီးကြီးလာပြီဆိုတာသိပြီး ဓာတ်လှေကား မြန်မြန်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့တဲ့။
ဓာတ်လှေကားလည်းရောက်လာရော လမ်းညွှန်ချက်တွေ ပြပေးထားတယ်။
၁။ အုပ်စု အေ(လောဘီထဲမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့) က အင်အားသုံးပြီး အုပ်စု ဘီ(ဓာတ်လှေကားထဲမှာ ရှိနေတဲ့အဖွဲ့) ဆီကို တိုးဝင်ကြရမယ်။ ဒီလိုမှမလုပ်ရင် ဘယ်သူနိုင်တယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်လို့ မရနိုင်ဘူး။
၂။ ဓာတ်လှေကားထဲ ပထမဆုံးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က အထပ်နံပါတ်တွေရှိတဲ့ ခလုတ်နေရာကို ဘယ်သူမှနှိပ်လို့မရအောင် သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကာထားရမယ်။
၃။ လူတွေရဲ့ ဒီလိုပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက် စက်လှေကားက နှစ်မိနစ်ရပ်နားပေးတယ်။ လူတွေသက်ပြင်းချ၊ အမောဖြေဖို့အတွက်။
ဒီဥပဒေက ကျွန်တော်တို့တိုက်ရဲ့ ဥပဒေရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အာရှတိုက်နဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး တိတိကျကျလိုက်နာနေရတဲ့ ဥပဒေတွေပါ။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်သူတွေကို ပြန်ပြောပြနေတဲ့ ရိုးရိုးသားသားပုဂ္ဂိုလ်(ကျွန်တော်) နဲ့ သူ့မိတ်ဆွေကတော့ လူတွေရဲ့အမူအကျင့်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ ဒီလိုလေး တီထွင်ကြံဆ လုပ်ဆောင်ကြည့်ကြပါတယ်။ ဒီလိုပါ-
၁။ လူတစ်ယောက် ဓာတ်လှေကားထဲဝင်လာတိုင်း “ ဟိုင်း၊ ဓာတ်လှေကားထဲရောက်အောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ပြုပါတယ်” ဆိုပြီး သူ့လက်ကို အားရပါးရဆွဲပြီး နှုတ်ဆက်ပေးပါ။
၂။ မြေညီထပ်မှာဆိုရင် ဓာတ်လှေကားတံခါးကို ပိတ်မရအောင် တားထားပြီး လိုအပ်တာထက် အချိန်ကြာအောင် အချိန်ဆွဲပေးပါ။ ဓာတ်လှေကားစောင့်နေတဲ့ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဓာတ်လှေကားဆီဖြည့်နေလို့ပါလို့ ပြောပေးပါ။
၃။ ဓာတ်လှေကားထဲမှာရှိတဲ့ မိုက်ကရိုဖုန်းကနေပြီး “ This is Alpha Bravo Elevator One to Control! Ready for Departure! Over!” လို့ ပြောပေးပါ။
၄။ ဓာတ်လှေကား စတက်ပြီဆိုရင် “ဓာတ်လှေကားလမ်းပြ စစ်စတမ်တွေကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေအားလုံး ပိတ်ပေးထားကြပါ” လို့ ကြေငြာပေးပါ။
၅။ ဓာတ်လှေကားစီးသူတွေ မျက်နှာကြီးတွေ ခပ်တည်တည်ဖြစ်နေရင် တစ်ဖွဲ့လုံးဖက်ထားကြဖို့ (group hug) အကြံပြုပါ။
၆။ အနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့ လူတစ်ယောက်ဝင်လာတိုင်း ဂျိန်စဘွန်းအကြောင်း စကားစပြောပေးပါ။
၇။ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး အတူတူဝင်လာရင် “မင်္ဂလာအခါတော်ပေးတေးသွားကို သံစုံဆိုပေးပါ။ ( သူတို့က တစိမ်းသက်သက်တွေဆိုရင် ပိုပြီးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်)
၈။ ဓာတ်လှေကားရပ်ပြီဆိုရင် “Switching doors to manual” လို့ ဓာတ်လှေကားနံရံက ပင်နယ်ဖက်ကို လှည့်ပြောပြီး “ I will never forget you” လို့ ခရီးသည်တွေကို ပြောပေးပါ။
ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက အကြံတစ်မျိုးရှိပြန်ပါတယ်။ မှန်အကြည်နဲ့ ဓာတ်လှေကားစီးရင်း တက်သွားပြီးဆိုရင် ရိုလာကိုစတာစတိုင်နဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်ပြီး “ဝေး” လို့ အော်ရမယ်တဲ့။ တစ်ခါတစ်လေ သူစီးထားတဲ့ ရှူးဖိနပ်ကိုချွတ်ပြီး “ဓာတ်လှေကား ငှားကြဦးမလား” လို့ ခရီးသည်တွေကို မေးတတ်ပြန်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သူနဲ့အတူ ဓာတ်လှေကားထဲရှိနေတုန်းကတော့ ဓာတ်လှေကားစီးရင် သိထားရမယ့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကို ခရီးသည်တွေဖက်လှည့်ပြီး လက်ချာပေးနေပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားစီးပြီဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို မတ်မတ်ထားရပါမယ်။ လက်နှစ်ဘက်ကို အောက်ချထားပြီး ပေါင်နဲ့ထိနေစေရမယ်။ အဲဒီ ထိနေတဲ့ပေါင်က ကိုယ့်ပေါင်ဖြစ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်” တဲ့။ ပြီတော့မှ သူက ဆက်တယ်။
“ကိုယ်ဆင်းမယ့်အထပ်ကို ဘယ်သူမှမရိပ်မိစေဖို့ အထပ်နံပါတ်ကို နှိပ်တဲ့အခါ နံပါတ်တွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကာကွယ်ပြီးမှနှိပ်ပါ။
ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစား ခင်ဗျားတို့နေတဲ့အထပ်ကို သိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ကတော့ ခင်ဗျားတို့နေတဲ့ အထပ်ရောက်ရင် ရောက်ပြီလို့ ပြောမှာပါပဲ။ အဲသလို အခါမျိုးမှာဆိုရင် ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက ခေါင်းကိုရမ်းပြီး -
“ကျွန်တော်က ခရီးစဉ်များတဲ့လူပါ။ တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့မတူအောင် အထပ်တိုင်းမှာ ဆင်းတတ်ပါတယ်” လို့ ပြောပြတတ်တယ်။
ကျွန်တော် အကြံပေးတဲ့အတိုင်းသာ လုပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို အဆောက်အဦးနဲ့ ပရိဘောဂထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီက စိတ်ဝင်စားသလို ခင်ဗျားတို့ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားလာလိမ့်မယ်ဆိုတာ အာမခံပါတယ်။
Ref: Reader Digest
First Time RidingaLift? By Nury Vittach.
in စာတိုပေစ, သီဟနာဒ - on 7/30/2012 - No comments
ကျောင်းမှာ ဥပဒေအသစ် ထုတ်လိုက်ကြသည်။
ဖူးလ် မွန်း၊ နယူး မွန်း နှင့် တနင်္ဂနွေ ဘုရားရှိခိုးချိန်တွင် သံဃာတော်များကို
လေးစားသောအားဖြင့် သံဃာတော်များ ခုံပေါ်တွင် သီတင်းသုံးပြီးမှ
လူပုဂ္ဂိုလ်များ ကြမ်းပြင်တွင် ထိုင်ရန်၊ ထို မတိုင်မီ လက်အုပ်ချီ မတ်တပ်ရပ် နေကြရန်ဖြစ်သည်။
ယင်း ဥပဒေအသစ် ၏ တန်ပြန် အကျိုးသက်ရောက်မှုက
ရဟန်းတော်များကိုယ်တိုင် အရင်နှင့် မတူ (လူ ပုဂ္ဂိုလ်များ အကြာကြီး ရပ်စောင့် မနေရရန်)
ကိုယ့်ရှူး ကိုယ်ပတ်သော ဥပဒေဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရ၏။
ကမ်းလက် ကိုးလပြည့် အမှတ်တရ
in သီဟနာဒ, အမှတ်တရ - on 7/28/2012 - No comments
တစ်လပြည့်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။ လန်ဒန်သားတုိ့ရဲ့ အမှားမှား အယွင်ွးယွင်း အိုလံပစ်လည်း စခဲ့ပြီ။
ခဏရပ်၊ ကျေးဇူးတရား တစ်ချို့ကို ပြန်ပွားမိတယ်။ ကတညုတ ကတဝေဒီ။
" ငါ့ရှင်တို့က ဘာလဲ
နာမည်တွေ မြေကြီးပေါ် ပစ် ချပြီး
လှလှ ပပ ပြိုင်ရဲပါတယ် " တဲ့။
နာမည်တွေ မြေကြီးပေါ် ချ ပြီး ကမ်းလက်ကို စခဲ့မိကြတယ်။
ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေး သုံးခု ကို
ယက်စပ်ပြီး ( တတ် မှတ် သမျှ ဖြန့် ဆန့် မိတယ်။)
ဝေးလွင့်သွားတဲ့ နားလည်မှုတွေကို နားလည်ရင်း...
ရှင်သန်ဆဲ၊ ဖွံ့ထွားဆဲ နားလည်မှုတွေကို တနိုးတမြတ် ထားရင်း...
(ရွာက ပြန်ရောက်တဲ့ နောက်)
ပို ကျယ်တဲ့ ၊( အင်တာနက်နဲ့ တစိမ်းတရံ )
စာဖတ်သူ လွင်ပြင်ဆီ စိတ်ဖြန့်ကျက်ရင်း
အားပေး စကားပြန် ရှစ်ခုကို ရိက္ခာ ထုပ် ပိုးရင်း
ပြည်တော်ပါ အတူး ( စိန်တူး ) နဲ့ ခက်ခက် တို့ရဲ့
မြေကြီးပေါ်က နာမည်တွေကို ကျေးဇူးစကား ဆိုရင်း
ကမ်းလာတဲ့ လက် အသစ်တွေကို ကျေးဇူးစကား ဆိုရင်း
ခရီးတစ်ခု ရဲ့ ထောင့်ချိုးကနေ ခပ် ကုပ်ကုပ် နောက်ပြန် ကြည့်မိတယ်။
"စရထ ဘိက္ခဝေ စာရိကံ "
လမ်း ဆက်လျှောက် ချစ်သား တို့ တဲ့။
သုံးလောက မီးရှူးရဲ့ အားပေးစကား
ခပ်ဝါးဝါး ပေမယ့် ကြားလိုက်တယ်။ ။
in ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 7/27/2012 - No comments
အိုလံပစ်က မစရသေးဘူး ဗြိတိသျှအိုလံပစ်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီကတော့ အဝါကတ် ထိသွားပြီ။ ကိုလံဘီယာ နဲ့ အမျိုးသမီး ဘောလုံးပွဲ မကန်မီ မြောက် ကိုရီယား အားကစား သမားတွေကို တောင် ကိုရီယား နိုင်ငံ အလံ နဲ့ တွဲပြီး မိတ်ဆက်လိုက်ပါလေရော။ ဒါကို မကျေနပ်တဲ့ ဘောလုံးသမားတွေက ကွင်းထဲဆင်းဖို့ ငြင်းဆန်နေလို့ တစ်နာရီ ကျော်ကျော် နောက်ကျသွားခဲ့တယ်။ မြောက်ကိုရီယား အိုလံပစ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က မကျေမနပ် အဖြစ်ဆုံး၊ ဒါမျိုး အမှား ထပ်ပြီး မကျူးလွန်မိစေဖို့ အိုလံပစ် ကော်မတီကို တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတော် အလံ နဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်း ကို ပွဲမစမီ မှန် မမှန် စစ်ဆေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရဲ့ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ယောက်ကို စေခိုင်းသင့်ကြောင်းလည်း အကြံပြု သွားခဲ့တယ်။
အိုလံပစ် ကော်မတီ ဂျက်ကွက် က ဒါမျိုး ထပ်မဖြစ်စေရဖို့နဲ့ ဖြစ်သွားတာကလည်း နိုင်ငံရေး ပယောဂ မပါ ဟျူးမင်း မစ်စ်တိတ် သက်သက်သာဖြစ်ကြောင်း တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကင်မရွန်းတောင် သူ့ နေရာသူ နေမရတော့ဘဲ ရိုးသားတဲ့ အမှား တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ဝင် တောင်းပန်ခဲ့ရတယ်။
ဂလက်စကို မှာရှိတဲ့ ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီက ဗီဒီယို အမှားကို ပို့လိုက်တဲ့ လန်ဒန် ဌာနချုပ်ကို လှမ်းပြီး အပြစ်တင်တယ်။ လန်ဒန်အိုလံပစ်ပွဲ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒါက ပထမဆုံး အကြိမ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး တဲ့။ တောင် အာဖရိက အသင်းကို လည်း တောင်းပန်ခဲ့ရ ပြီးပါပြီ။ လူမျိုးရေး အသားရောင် ခွဲခြားတဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်း ကို မှား ဖွင့်လိုက်မိလို့ ပါ တဲ့။
ဒါတင် မပြီးသေးဘူး။ ကိုလံဘီယာ နည်းပြက ပွဲစဉ် ကပျက် ယပျက် ဖြစ်ပြီး သူ့ ကစားသမားတွေ စိတ် ကသိကအောက် ဖြစ်ရတာမို့ မြောက် ကိုရီယားကို နှစ် ဂိုးပြတ် ရှူံးရတာလို့ စောဒက တက်နေဆဲ ပါ။
လန်ဒန်အိုလံပစ်ပွဲတော် ကတော့ အမှားတွေနဲ့တင် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေပြီ။
Ref: The Times,London. Associated Press. AGENCE France-press.
အရှေ့နဲ့ အနောက် ဘော့စ် များ
in Mr Jam, ဇင်ဝေသော် - on 7/26/2012 - No comments
ဝန်ထမ်း လျှော့ချတဲ့ အထဲမှာ ကိုယ် ပါသွားပြီဆိုရင်...
အနောက် ဘော့စ်။ ။ ဒီကိစ္စအတွက် လုံးဝ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ကျနော်တို့မှာလည်း ရွေးစရာ မရှိတော့......... ။
အရှေ့ ဘော့စ်။ ။ ယူ အာ အောက်တ်။ (You are out.)
အလုပ်ခန့်လိုက်ပါပြီလို့ အသိပေးတဲ့ အခါ.....
အနောက် ဘော့စ်။ ။ လူတွေ့ နှစ်ကြိမ် အင်တာဗျူးပြီးတဲ့နောက် ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ ဆုးံဖြတ်ချက်အရ ခင်ဗျားကို ခန့်လိုက်ပါပြီ။
အရှေ့ ဘော့စ်။ ။ ယူ အာ အင်။(You are in.)
လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ပိုကောင်းတဲ့ အထောက်အကူ ပစ္စည်း စတာတွေ တောင်းဆိုရင်.....
အနောက် ဘော့စ်။ ။ နားလည်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး တောင်းဆိုထားတာတွေ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါမယ်။
အရှေ့ ဘော့စ် ။ ။ ဟား ဟား ဟား။ (Ha ha ha)
လစာတိုးပေးဖို့ တောင်းတဲ့ အခါ......
အနောက် ဘော့စ် ။ ။ ခင်းဗျား တိုးတောင်းတာက နည်းနည်းများနေတယ်ဗျာ၊ စာရင်းကိုင် မန်နေဂျာနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်ပါရစေဦး။
အရှေ့ ဘော့စ် ။ ။ ဟား ဟား ဟား။
အထက်လူကြီးကို ဝေဖန်မိတဲ့ အခါ.........
အနောက် ဘော့စ် ။ ။ ဝန်ထမ်းတွေက တစ်ခုခု ဖီးဘက် ပေးစရာရှိရင် ကျနော်တို့ နားထောင်ဖို့ အသင့်ပါ။
အရှေ့ ဘော့စ် ။ ။ ယူ အာ အောက်တ်။
အလုပ်တွေ ပိနေကြလို့ အားပေးစကား ပြောဖို့ လိုတဲ့ အခါ........
အနောက် ဘော့စ် ။ ။ အလုပ်အရမ်းပိနေတာ သိပါတယ်ဗျာ၊ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားကြတာပေါ့။
အရှေ့ ဘော့စ် ။ ။ ယူ လိတ်၊ ယူ အောက်တ်။ ( You late, you out )
ကျန်းမာရေး တစ်ခုခုကြောင့် နစ်နာကြေး တောင်းတဲ့ အခါ.......
အနောက် ဘော့စ် ။ ။ အားလုးကို မကာမိရင်တောင် ဆေးကုသစားရိတ်ကိုတော့ ကုမ္ပဏီ က ကျခံမှာပါ။
အရှေ့ ဘော့စ် ။ ။ ယူ အောက်တ်။
ကျန်းမာရေး ခွင့် တစ်ရက်လောက် တောင်းတဲ့ အခါ.......
အနောက် ဘော့စ် ။ ။ ကောင်းပါပြီ၊ နေကောင်းသွားရင် မနက်ဖြန် တွေ့ကြတာပေါ့။
အိုဗာတိုင် ဆင်းပေးဖို့ လိုတဲ့အခါ
အနောက် ဘော့စ်။ ။ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီလောက် အချိန်ပို ဆင်းပေး နိုင်ကြမလား၊ လုပ်အားခ နှစ်ဆ ပေးပါမယ်။
အရှေ့ ဘော့စ်။ ။ကုမ္ပဏီ တံခါးပေါက်ကို သော့ခတ်ပစ်လိုက်၊ တစ်ယောက်မှ မပြန်စေနဲ့။
in ပြုံးစိစိ - on 7/25/2012 - No comments
ပုဆိန်နဲ့ရိုက်ခွဲချင်တဲ့ ဝါသနာ ပါတာ။
“လူတော်လူကောင်းများရောက်သွားလျှင် ငရဲပြည်လည်း တိုးတက်လာနိုင်သည်”
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 7/25/2012 - No comments
အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်လိုသူများ ငရဲဘုံ၌ ဝင်းခြံများဝယ်ယူထားရန် အကောင်းဆုံးဟု ဆိုရပေမည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ ဘဏ်သူဋ္ဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်သော Ryuho Okawa ဆိုသူက သူသည် ဗုဒ္ဓကို ဝင်စားသူဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ သူသာမက သူ့ဇနီးကလည်း အက်ဖရိုဒီတေး (Aphrodite) ကို ဝင်စားသူဟု ဆိုခဲ့ပြန်သည်။
အာရှတိုက်ကား အယုံလွယ်၏။ အထူးသဖြင့် ဂျပန်နှင့် မြန်မာ (သို့) ဘားမားတို့က လူများ ပို၍အယုံလွယ်၏။ ရှိစေ။ ဤကိစ္စက ရေးလိုသောကိစ္စမဟုတ်။
ဗုဒ္ဓကို လူဝင်စားခဲ့သည်ဟု ကြော်ငြာခဲ့သော ထိုဘဏ်သူဋ္ဌေး အိုကာဝါနှင့် သူ့ဇနီးတို့ အရင်လက ကွာရှင်းခဲ့ကြသည်ဟု သိရပြန်သည်။ သို့ဆိုသော် ထိုအိုကာဝါသည် လူပျိုလူလွတ်ဖြစ်နေပြန်သည်။ ဤကိစ္စကလည်း ရေးလိုသောအကြောင်းမဟုတ်။
အဓိကရေးလိုသောအကြောင်းကား အိုကာဝါ၏ ပြန်လည်ပြောပြခြင်း ဇာတ်လမ်းများသာဖြစ်၏။ သူ့အဆိုအရ-
၁။ ဆရာကြီး ဗီသိုဗင် (Beethoven) သည် ဘုရားအလောင်းတို့ စံပျော်ရာ ကောင်းကင်ဘုံ၏ ခုနှစ်ခုမြောက်သော ဘုံ၌စံမြန်းနေ၏။
၂။ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှဟု ဆိုရပေမည်။ ရီဗော်လူးရှင်း သီအိုရီ၏ဖခင်ကြီး ချား(စ်) ဒါဝင်ခမျာမှာတော့ အလွန်နက်သော ငရဲ (Abysmal Hell) မှာ ကျရောက်ခံစားနေရသည်။
၃။ ဒါဝင်ကမှ တော်သေးသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ သူ့ထက် အခြေအနေပို၍ဆိုးဝါးသော ပုဂ္ဂိုလ်ကား ဂရိတ်ဖလော်ဆော်ဖာ ဖရက်ဒရစ်(ခ်) နစ်ရှေး (Frederic Neitzche) ဖြစ်ပေ၏။ သူ့ခမျာကား အောက်ဆုံးငရဲ၌ (Deepest Hell) ချိုးကပ်နေရသည်ဟု ဆိုလေ၏။
မစ္စတာ ဒါဝင်နှင့် မစ္စတာ နစ်ရှေးတို့ ဘာ့ကြောင့်ငရဲဘုံ၌ ခံစားနေကြရသည်ဟူ၍ကား ရှင်းပြထားမှုမရှိပေ။ နောက်တောက်တောက် မစ္စတာ ဂျင်း(မ်) ကတော့ နစ်ရှေးက “ဂေါ့ဒ် အစ်ဇ် ဒက်(ဒ်)” ဟုဆိုခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်ဟန်တူကြောင်း မှတ်ချက်ပေးထားသည်။
ဂျပန်၌ပင်ဖြစ်၏။ လွန်ခဲ့သော အနှစ် (၂၀) ခန့်က ပန်းကန်ပြားပျံဘာသာ တော်တော်ရေပန်းစားခဲ့သေး၏။ UFO- ဟုခေါ်သည်။ ထိုဘာသာခေါင်းဆောင်က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသား(ထင်သည်) ဖြစ်ပြီး သူ့နာမည်ကို မမှတ်မိတော့။ သူ၏အဆိုအရ သူသည် ပန်းကန်ပြားပျံမှ ဆင်းလာသော ဂြိုလ်သားနှစ်ယောက်နှင့် တွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ သူ့ကို ဤကမ္ဘာ၏ တမန်တော်အဖြစ် အခြားဂြိုလ်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များက ရွေးချယ်ထားကြကြောင်းဆို၏။ ဤကမ္ဘာမှ လူသားများ၏ အသိဥာဏ်သည် အခြားဂြိုလ်များက ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်က များစွာနိမ့်ပါးနေကြကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လူသားများ၏ အသိဥာဏ်မျှလောက်ဖြင့် အခြားဂြိုလ်ကမ္ဘာမှာ ရပ်တည်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဆိုပြန်၏။
သူ့အဆိုအရ ဗုဒ္ဓ၊ ဂျီးဇက်ခရိုက်စ်၊ မိုဟာမက်တို့သည်လည်း ထိုဂြိုလ်က စေလွှတ်ခြင်းခံရသော တမန်တော်များသာဖြစ်ပြီး တာဝန်ပြီးဆုံးသောအခါ ထိုဂြိုလ်က ပြန်လည်ခေါ်ယူထားသည်။ ယခုအခါ သူတို့သုံးဦးသည် ထိုဂြိုလ်ကမ္ဘာ၌ ပျော်ပျော်ပါးပါး ရှိနေကြသည်ဟု ဆိုလေ၏။
ယနေ့တော့ ယင်းပန်းကန်ပြားပျံဘာသာအကြောင်း မကြားရတော့။
ဆိုးတော့ မဆိုးပေ။ သူ့အဆိုအရ ငရဲကျနေသော ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မရှိ။
နောက်ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အယူအဆပေါ်လာပြန်သည်။ ထိုယုံကြည်မှုအရ ထာဝရဘုရားကို မယုံကြည်သူတိုင်း ငရဲကိုကျရောက်ကြရ၏။ ထို့ကြောင့် ရှေးဦးစွာ ဂေါတမဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင် ငရဲရောက်နေသည်ဟု ဆိုကြပြန်၏။ ဗုဒ္ဓသာမကပါ၊ ထိုဝါဒကို လုံးဝအယုံအကြည်မရှိသော သိပ္ပံဖခင်ကြီး အိုင်းစတိုင်းခမျာမှာလည်း ငရဲရောက်ခဲ့ရပြန်၏။
အတွေးအခေါ်ပညာရှင် နစ်ရှေး၊ ဗာထရန် ရပ်ဆဲလ်။
စာရေးဆရာ ဂျော့(ခ်ျ) ဘားနတ်ရှော။
အီဗော်လူရှင်းဆရာကြီး ဒါဝင်နှင့်တကွ သိပ္ပံပညာရှင်တော်တော်များများ ငရဲရောက်နေကြသည်ဟု ပြောဆိုလာကြကုန်၏။
ထိုအခါ စကားခပ်ဆတ်ဆတ်ပြောတတ်သော စာရေးဆရာတစ်ယောက်က ဤသို့ မှတ်ချက်ချ ရေးသားဖူး၏။
“ကောင်းကင်ဘုံပင် ဖြစ်လင့်ကစား ဂေါတမဗုဒ္ဓလို၊ အိုင်းစတိုင်းလို၊ ဘာထရန်ရပ်ဆဲလ်လို၊ ဂျော့ခ်ျ ဘားနတ်ရှောလို၊ ချား(စ်) ဒါဝင်လို လူတော်လူကောင်းများ မရှိဘူးဆိုလျှင် အသိပညာများ နိမ့်ပါးကာ အလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်ကောင်းသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ထို့အတူ ငရဲပင်ဖြစ်သော်လည်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ရှိနေမည်ဆိုလျှင် အသိဉာဏ်များ လင်းလက်ကာ နေချင့်စဖွယ် ဘုံဌာနတစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ် ဘယ်ဘုံကို သွားချင်ပါသလဲဟုမေးပါက ဂေါတမဗုဒ္ဓတို့၊ အိုင်းစတိုင်းတို့ရှိနေသော ငရဲကို သွားလိုပါသည်” ဟု သရော်သံစွက်စွက်ဖြင့် ခပ်နာနာနှက်ခဲ့လေသည်။
ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်၏ လူသားအရင်းအမြစ် မူဝါဒကိုကြည့်ကာ အထက်ပါအဆိုတို့ကို ထောက်ဆရင်း ကွန်ကလူးရှင်း ဆွဲလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ဘာသာရေးပုတ်ခတ်လိုသော စကားတို့ဖြင့် မည်သူငရဲရောက်နေသည်ဟုဆိုစေ၊ ဤမျှတော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ရောက်ရှိသွားမည်ဆိုလျှင် ငရဲပြည်လည်း တိုးတက်လာမှာမလွဲပေ။ လူတော်လူကောင်းများ နေထိုင်သောနေရာသည် တိုးတက်လာမည်မုချ မဟုတ်ပါလော။
ထိုထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ စကားများမှန်လျှင် စကြာဝဠာတစ်ခုလုံး ပါဝါရှစ်ဖ် (Shift) ဖြစ်တော့မည့်သဘော ရှိနေသည်။ ငရဲပြည်သည် အမှန်တကယ် တိုးတက်လာမည့်နေရာဖြစ်ပြီး အိမ်ယာမြေဈေးများ တဟုန်ထိုး ထိုးတက်လာစရာသာရှိတော့သည်။ ကောင်းကင်ဘုံက မြေကိုရောင်း၍ ငရဲဘုံ၌ ဝယ်ထားသင့်၏။
☺ ရီလေးတစ်ဗတီ သီအိုရီ ☺
in ပြုံးစိစိ, လှည့်ကြည့်မိတဲ့ ထောင့်ချိုးများ, ခေတ်သစ်ပုံပြင် - on 7/24/2012 - No comments
"ရီလေးတစ်ဗတီ သီအိုရီ မှန်ကန်ကြောင်းထင်ရှားရင်
ဂျာမန်တွေက ကျနော်ဟာ ဂျာမန်လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပြီး
ပြင်သစ်တွေကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသား လို့ပြောကြလိမ့်မယ်။
ရီလေးတစ်ဗတီ သီအိုရီ မမှန်ဘူးဆိုရင်တော့
ကျနော်ဟာ ဂျာမန်လူမျိုးလို့ ပြင်သစ်တွေကပြောပြီး
ဂျာမန်တွေကတော့ ကျနော်ဟာ ဂျူးလူမျိုးလို့ပြောကြလိမ့်မယ်။"
အဲဒီအချိန်မှာ မီးဖိုထဲက အသံ တစ်သံထွက်လာတယ်။
"ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော ရှင်ဟာ ကျမယောက်ျားပါ လို့ပြောဖို့တော့ တော်တော်ခက်နေပြီ"
အိုင်းစတိုင်းကြီး ဒီတော့မှ ငြိမ်သွားတယ် တဲ့။
အဲဒီ ရီလေးတစ်ဗတီ သီအိုရီ က ညစာနဲ့ပိုနီးနေတာကိုး။
ပရိုက်ဘိတ် ဒေသနာ၊ ပတ်ဘလစ် ဒေသနာ
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 7/24/2012 - No comments
တစ်ခါက ဒကာတစ်ယောက်၏အီးမေးလ်၌ စတေးတပ်တင်ထားတာကို ဖတ်လိုက်ရ၏။ ဆရာတော်တစ်ပါး၏ စကားဖြစ်သည်။
“ ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်အတွက်ကျန်အောင်လုပ်” ဖြစ်သည်။
စဉ်းစားမိ၏။ လူသည် ကိုယ့်အတွက်မကျန်ဘဲ လုပ်တတ်သောအမျိုးဟုတ်သလားဟု ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်က သံသရာပါမည့် ဒါန၊ သီလ၊ အထူးသဖြင့် ဘာဝနာကိစ္စကိုလုပ်ရန်၊ အခြားသော ဗာဟီရကိစ္စများဖြင့် အချိန်မကုန်စေရန် သတိပေးစကားဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းသဘောပေါက်နိုင်သည်။ သို့သော် ယနေ့ခေတ် မစ်ရှင်နရီများကတော့ ဒီလိုစကားမျိုး လူထုထဲပြောဖို့ ရှောင်ကြဉ်ကြရပြီဖြစ်သည်။ ဘာသာရေး အဆုံးအမအရ မှန်သော်လည်း လူကြားထဲပြောသင့်၊ မပြောသင့်ကိုကား စဉ်းစားစရာ ရှိလာပြီဖြစ်ပေသည်။ မြန်မာလူထုကို မြန်မာလိုပြောလျှင်တော့ ပြဿနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မရှိနိုင်။ သို့သော် အခြားယဉ်ကျေးမှု ရှိသော သူများကိုပြောလျှင်တော့ “အတ္တကြီးလှပါလား” ဟူသော မှတ်ချက်ရနိုင်ပေသည်။
ဘာသာရေးအရ မှန်သော်လည်း အင်္ဂလိပ်နှင့် အခြားဘာသာစကားများဖြင့် မပြောသင့်သော အချက် များစွာရှိသည်။
ဥပမာ။ ။ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရကြောင့် မိန်းမဖြစ်ရသည်။
နိုင်ငံခြားသားများထဲ၌လုံးဝမပြောသင့်သောစကားဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများကို စော်ကားသလို ဖြစ်နေသည်။အမျိုးသမီးများအားလုံးအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခဲ့ကြသူများဟုအဓိပ္ပါယ် ရောက်သွား တော့သည်။ မြန်မာဆရာတော်နှင့် မြန်မာအမျိုးသမီးထုကတော့ ဘာမှမထူးဆန်းသလို နားထောင် လိုက်ကြပေလိမ့်မည်။ သို့သော် အင်တာနေရှင်နယ်ထဲဝင်လျှင်တော့ ဒုက္ခကောင်းကောင်း ရောက်နိုင်သော အယူအဆဖြစ်သည်။
နောက် ဥပမာတစ်ခုကို ထပ်ကြည့်ပါ။
နှမြောခြင်း၊ မပေးလှူခြင်း၊ သူတပါးပစ္စည်းကို ခိုးယူခြင်းကြောင့် ယခုဘဝမှာ ဆင်းရဲမွဲတေရသည်။
ဤစကားကျတော့ အဆင်ပြေသည်။ နှမြောခြင်း၊ ခိုးယူခြင်းစသည်တို့ကြောင့် မွဲတေရခြင်း၌ လူတန်းစားခွဲမထားပေ။ အမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊ အမျိုးသားဖြစ်စေ ဆင်းရဲသူက ဆင်းရဲ၍ ချမ်းသာသူက ချမ်းသာကြသည်။
မုသာဝါဒ၏ အကျိုးဆက်ကိုပြရာ၌လည်း သမီးမိန်းကလေးများကြီး မွေးဖွားခြင်းပါလာပြန်သည်။ အလွန်အဆင်မပြေသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်သုံးစကားများ၌ပင် မှန်သော်လည်း လူကြားထဲပြော၍မသင့်သော စကားများရှိသည်။ ထိုစကားမျိုးကို နှစ်ဦးချင်း (သို့ ) လူနည်းစုမျက်နှာခြင်း ဆိုင်၍သာ ပြောကြ ရသည်။ နှစ်ဦးသားပြောရမည့် စကား အပြင်ရောက်သောအခါ မလိုအပ်သော အဓိပ္ပါယ်ထွက်သွားတော့သည်။
မူရင်းကို ပြန်သွားပါမည်။ “ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ ကိုယ့်အတွက်ကျန်အောင်လုပ်” ဟူသော စကားမျိုးက နှစ်ဦးချင်း လက်သိပ်ထိုး ပြောရမည့်စကားမျိုးသာဖြစ်သည်။ ဘုရားစကားပြန်ပြောတာပဲ၊ ဘာဂရုစိုက် နေရဦးမှာလည်း ဟု ဆိုရန်တော့ရှိသည်။ သို့သော် ဘုရားရှင်၏ ဒေသနာများ ကပင် နှစ်ဦးချင်းပြောသော ၊ ဟောသောဒေ သနာနှင့် လူထုကို ပြောသော၊ ဟောသောဒေသနာဟု နှစ်မျိုးကွဲနေသည်။
လူထုကိုဟောရာ၌ “သတ္တာနံ ဟိတာယ၊ သုခါယ” စသော ယေဘုယျဆန်ဆန် စကားမျိုးကို ရှေ့တန်းတင် ၍ ဟောတော်မူသည်။ သတ္တဝါတို့အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ လူထုကို ဟောသော ၊ ပြောသော ပတ်ဗလစ်ဒေသနာ( Public Talk) ၌ “လုပ်ကြ၊ ကိုယ့်အတွက်ကျန်အောင် လုပ်ကြ” ဟု ဆိုလျှင် အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့။ မစ်ရှင်နရီစကား မဟုတ်တော့ပေ။ စဉ်းစားကြည့်ကြစေချင်ပါသည်။ စကားမမှား၊ နေရာမှားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
သုတ္တာန်ဒေသနာတော်တော်များများသည် ပရိုက်ဗိတ်ဒေသနာများ ဖြစ်ကြသည်။ တနည်းဆိုရသော် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အမေးကို မျက်နှာခြင်းဆိုင်ဖြေသော ဒိုင်ယာလော့များဖြစ်သည်။ သေသေချာချာ ကြည့်လျှင် အဖြေများ အနည်းငယ်ကွဲလွဲနေသည်။ အကြောင်းက နာခံယူသူ၏ အနေအထားနှင့် စိတ်နေစရိုက်၊ ပါရမီအနုအရင့်တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
အထင်ရှားဆုံးသော ပရိုက်ဗိတ်ဒေသနာကား အရှင်အာနန္ဒာနှင့် ဘုရားရှင်တို့ကြားက အမျိုးသမီးနှင့် ပတ်သက်သော စကားများဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့သဘောထား ရမည်နည်းဟု အရှင်အာနန္ဒာကမေးရာ- “ အ ဒဿနေ ” ဟု ဖြေသည်။ မကြည့်နဲ့ဟု ဖြစ်သည်။ နှစ်ပါး တည်း မေး၊ ဖြေ နေ၍သာ အဆင်ပြေသည်။ လူကြားထဲမှာ “ရဟန်းတို့၊ အမျိုးသမီးတွေကို မကြည့်ကြနဲ့” ဟုဆိုလျှင် အလွန်အဆင်မပြေသော ဒေသနာဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။
ဒုတိယအမှာက “ အ နာလာပေါ” စကားမပြောနဲ့ဟု ဖြစ်သည်။
ဤပထမ၊ ဒုတိယအမှာတို့က အမှန်ပင် ပရိုက်ဘိတ်ဒေသနာများဖြစ်သည်။ လူကြားထဲပြော၍ပင် မသင့်ပါ။ မမှန်၍ကား မဟုတ်၊ မပြောသင့်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
“သတိတရားနဲ့ ဆက်ဆံ” ဟု ဖြစ်လေသည်။ ဤစကားကတော့ ဘယ်မှာပဲပြောပြော အဆင်ပြေသည်။ ဘုရားရှင်၏ ဒေသနာအားလုံးကို စုပေါင်း၍ ပိဋကတ်တွင်သွင်း၊ သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့ရာ လူထုကိုဟောသော တရား၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီကို ဖြေတော်မူသောစကားများလည်း ရောနှောသွားလေတော့သည်။ ယခုဆွေးနွေးခဲ့သော စကားများသည် အင်္ဂလိပ်စသော ဘာသာစကားနှင့်ပြောတော့မည်ဆိုလျှင် လုံးဝလူထုကို မပြောသင့်သော စကားများ ဖြစ်သည်။
“Just mind only your business and your profits”
( ကိုယ့်အတွက် ကျန်အောင်လုပ်၊ ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ် ရှေ့ထား)
“You committed sexual misconducts in your previous lives. So you are woman now.”
( ကာမေသု မိစ္ဆာစာရကံကြောင့် သင်အမျိုးသမီးဖြစ်နေရသည်)
“You have daughters but no son. The cause was you were telling lies in your previous lives.”
(သင်တို့ သားယောင်္ကျားလေးမရခြင်းက အတိတ်က လိမ်ညာခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။)
“Don’t look at women, Arnanda. Don’t talk or communicate with them.”
( အာနန္ဒာ၊ အမျိုးသမီးတွေကို ကြည့်လည်းမကြည့်နဲ့၊ စကားလည်း မပြောနဲ့)
တရားဟောဆရာတစ်ပါးက မှတ်ချက်ပြုဖူးသည်။ ဤအတိုင်းသာဆိုလျှင် ဘုရားမှာပင် ဖိုးဘီယား ဖြစ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံရကိန်းရှိ၏ဟု ဖြစ်သည်။
ဒေသနာတော်များကို ပတ်ဘလစ်ဒေသနာလား၊ ပရိုက်ဘိတ်ဒေသနာလားဟုတော့ ခွဲခြားထားရန် လိုပါလိမ့်မည်။
“ဘာလုပ်လုပ်၊ ကိုယ့်အတွက် ကျန်အောင်လုပ်” ဟူသည် တစ်ဦးချင်းစီပြောရာတွင် ဘာသာရေး အဆုံးအမဖြစ်ပြီး ပတ်ဘလစ်တွင် ပြောလျှင် စီးပွါးရေးစကား၊ မားကက်တင်းစကား ဖြစ်သွား တော့သည်။ စီးပွါးရေးသမားများကပင် “စားသုံးသူအတွက်” စသည် သုံးစွဲနေကြသည်ကို ဆင်ခြင်တော် မူကြပါကုန်။
အေးဂျင့်များ က အသက်မပြည့်မီသော မြန်မာ အိမ်ဖော် မိန်းကလေးများ ကို စင်ကာပူထဲ လိမ်လည် ပို့နေ
in ဘာသာပြန်, သတင်း - on 7/23/2012 - No comments
အသက်မပြည့်မီသော မြန်မာ မိန်းကလေးများ စင်ကာပူတွင် အိမ်ဖော် အဖြစ် အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် အသက် လိမ်လည်နေကြကြောင်း သိရသည်။ ပတ်စပို့ အတုများဖြင့် လာရောက်ကြပြီး အချို့ဆိုလျှင် ၁၆ နှစ်သာ ရှိကြသေးသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စ၍ စင်ကာပူ ဥပဒေ အရ အိမ်ဖော် မိန်းကလေးသည် အနည်းဆုံး အသက် ၂၃ နှစ် ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အသက်မပြည့်မီသော မြန်မာ မိန်းကလေးအိမ်ဖော်များ စင်ကာပူ၌ မည်မျှရှိသည်ကို အတိအကျ မသိရ။
စင်ကာပူရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဆက်သွယ်ရာ သတင်းစာထွက်ချိန်အထိ ပြန်ကြားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ပြဿနာကြုံလာလျှင် ထိုမိန်းကလေများကို လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများက ကူညီစောင့်ရှောက်ထားကြောင်လည်း သိရသည်။ အမည်မဖော်လိုသော စင်ကာပူအေဂျင်စီ လေးခု အဆိုအရ အသက် ၂၀ အောက် မြန်မာ မိန်းကလေး အများအပြားကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေ့ဂျင့်က အသက်အတု၊ ပတ်စ်ပို့ အတုများဖြင့် စင်ကာသို့ လာလို့ရအောင် စီမံပေးလျက်ရှိသည်။
မြန်မာအေးဂျင့်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ မချယ်ရီအောင်က "မြန်မာ မိန်းကလေး တွေဟာ ဝင်ငွေပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပဲ သိပြီး စင်ကာပူရဲ့ ဥပဒေကို မသိကြ။ အေးဂျင့်များ ပြောတာကိုပဲ ယုံကြည်နေကြသည်" ဟုဆိုသည်။ မြန်မာ အိမ်ဖော် မိန်းကလေး တစ်ယာက်အနေနှင့် ဒေါ်လာ ၄၀၀ မှ ၄၂၀ အထိ ရနိုင်ပြီး မိမိတို့ အိမ်ကို တစ်ချို့ ပြန်ပို့နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေ မြန်မာ အိမ်ဖော် မိန်းကလေး တစ်သောင်းခန့် စင်ကာပူ၌ ရှိသည်။
ဝရဓာတု ရတနာရာမ အဖွဲ့၏ အတွင်းရေမှူး ဦးတင်မောင်ဝင်း က မြန်မာပြည်၏ တည်ဆဲ ဥပဒေအရ မိန်းကလေးများ အိမ်ဖော်အလုပ် နိုင်ငံခြား၌ လုပ်ခွင့်မရှိ၊ တိုးရစ် ဗီဇာဖြင့် ရောက်လာပြီး မပြန်ဘဲ အလုပ် လုပ် နေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်ရှိ အရာရှိများကို လာဘ်ထိုးလိုက်လျှင် ရသည် ဟု အလုပ်သမားများက ဆိုသည်။ မျိုးမျိုး ဆိုသည့်မိန်းကလေးကို မေးမြန်းကြည့်ရာ သူမအသက် ၁၆ နှစ်သာ ရှိသေးကြောင်း၊ ပတ်စ်ပို့ အတု တစ်ခုရဖို့ ဒေါ်လာ လေးရာ ပေးရကြောင်း၊ သူမ မိခင်နှင့် အေးဂျင့်က မိတ်ဆွေရင်းများဖြစ် ပြီး မည်သူက အသက်ကို မေးမေး ၂၃ နှစ် ဟု ဖြေရန် မှာကြားလိုက်ကြောင်း ဖြေဆိုခဲ့သည်။
Ref: The Straits Time. Home. B 1. Monday, July 23, 2012.
Labels: ဘာသာပြန်, သတင်း
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 7/23/2012 - No comments
ကျနော့်ကိုထားခဲ့ပါတော့ ဝေနှင်း ရေ။
ဒါနဲ့ ဝေနှင်း၊ မြစ်ကမ်းနဘေးမှ ခြေတွဲလောင်းချ ထိုင်ရင်းနဲ့
ပျော်စရာကောင်းသလောက် အခန့်မသင့်ရင် တော့ ဖျားတတ်တာပေါ့။
လူတွေက မြေညှိဖို့ပဲ ကြိုစားနေကြတယ်၊
ညီနေတဲ့မြေပေါ်မှာ ဘယ်သူခြေ တွဲလောင်းချ
ထိုင်လို့ရမှာလဲ လို့ ဆရာဇော်ဇော်အောင်ပြောဖူးတယ်။
ဟင့်အင်း၊ ကျနော်ဟာ မြေညှိတဲ့စက် တစ်လုံးဖြစ်ဖို့ အိပ်မက် မမက်ခဲ့ဖူးပါဘူး။
ကျနော့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အတွက် အော်ကြီးဟစ်ကျယ်
ကျနော် မငိုခဲ့ပါဘူး။ တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်တော့ ငိုနေခဲ့တယ်ဆိုရင်
အဲဒါ ကျနော့်အဖိုးပါ။ သူပျော်လွန်းလို့ငိုမိတာပါလို့ သူ ပြောဖူးတာမှတ်မိပါတယ်။
ငိုရင် မျက်ရည်အပြင် နှာရည်တွေပါကျတတ်လို့ပါ။
ဒါကြောင့် ငိုတယ်ဆိုတာ မကောင်းပါဘူး။ ဝမ်းသာလို့ငိုရင်
နှာရည်တွေ ညာဖက်က ကျတာ များ သတဲ့။ ဟုတ်ချင်မှတော့ ဟုတ်မှာပေါ့လေ၊
ဒါပေမယ့် မကြာမကြာ ငိုတတ်တဲ့အဖိုးစကားမို့ မယုံကြည်ဘဲ နေဖို့ကလည်း အခက်သားလား။
ဒါနဲ့ ကျနော်မေးထားတာကို ဝေနှင်းမဖြေရသေးဘူးနော်။
ဘုရားကိုယ်တိုင်မဖြေခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတောင် ဆယ်ခုလောက်ရှိသတဲ့။
မေးခွန်းတိုင်းအဖြေရှိရမယ်လို့ ဘယ်ပညာရှင်မှ ဆိုမထားပါဘူး။
ကျနော် တကယ်ရော မေးဖြစ်ခဲ့သလားမသိဘူးနော်။ ကျနော် မေးဖို့ မေ့နေ ခဲ့တာလည်း
ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ မေးဖို့ သတိရခဲ့ရင်တောင် ဘာမေးရမယ်ဆိုတာမသိရင် မေးလို့ဘယ်ရမလဲ နော်။
ဟဲမင်ဝေးက မာက်တွိုင်းကို အကြောင်းသုံးချက်ကြောင့် ကြိုက်တယ်တဲ့။
မာက်တွိုင်းက သေသွားပြီ မို့ တဲ့။ သူပြောသလိုဆိုရင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်ဖို့
ဒါနဲ့ ကျနော်မေးတာကို ဝေနှင်း မဖြေရသေးဘူးနော်။
ကျနော်ဟာ နောက်ဆုံးက လူပါ။ အဲ နောက်ဆုံးက လူလည်း
ကျနော်ဖြစ်ချင်နေခဲ့တယ်။ ကျနော်ကြားဖူးတာက နောက်ဆုံးက လူဟာ
နောက်က ချောင်းရိုက်တာ မခံရဘူး တဲ့။ ဝေနှင်းလည်း ဝေစရာ ရှိရင်တောင် နောက်ဆုံးမှ
ဝေကြည့်ပါလား။ နှင်းတွေက လူတွေလို နောက်က ချောင်းရိုက်တာ ရှိသလားတော့ မသိဘူးပေါ့လေ။
သူတို့ကို လူတွေက ကြည့်လို့မရဘူးဆိုတာကို
နောက်ဆုံးမှ ယုံကြည်သူတွေက နိုင်ငံရေး သမားတွေတဲ့ ဝေနှင်းရေ၊
သားမက်ရဲ့ အောင်မြင်မူကို နောက်ဆုံးမှ ယုံကြည်သူတွေက သူ့ယောက္ခမတွေ တဲ့။
သူတို့ဟာ အုန်းလီး ဖူး ရပ်ရှင်းကို ကိုးကွယ်ကြသူတွေ ဖြစ်လို့နေမှာပေါ့။
ယုံကြည်မှုဆိုတာ ရှေ့က ပန်းဝင်ရင်တောင် ဆုမရ တတ်ဘူးမဟုတ်လား။
မေးဖို့မေ့မနေဘူး ဆိုရင်တောင် ဘာမေးရမယ်ဆိုတာ မေ့နေရင် မေးလို့ ဘယ်ရမလဲနော်။
ကျနော် ဝေနှင်းကို တစ်ခုခု မေးမိသလား။ မမေးဘဲ ဖြေလို့ရတာတွေရှိနေတတ်တော့
မေးခွန်းဆိုတာ အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ အရာ ဟုတ်မဟုတ် မသေချာပြန်တော့ဘူး။
နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ် သားမက်လည်းမရှိဘဲ
ကျနော့်ယုံကြည်မူတွေ နောက်ကျနေတတ်လို့ ကျနော့်ကို ချန်ထားခဲ့ပါ။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံက ပူတော့ ကျနော့် အိပ်မက်တွေကလည်း ချွေးတွေနဲ့။
ဒါနဲ့ ရေဆင်းသောက်မိတာပါ။ ဆားငန်ရေ ဖြစ်နေတော့ ဟော်တယ်ခ က တစ်ည ကို ခြောက်သောင်း တဲ့။
ကျနော့်မိတ်ဆွေ ချိန်းထားတဲ့ သမင်ကို ပီဠိယက္ခက အရင် ပစ်ယူသွားလို့ အဲဒီနေ့က သုဝဏ္ဏသာမ မြားဒဏ် မထိခဲ့ဘူး။
ဒီတစ်ခါ ပီဠိယက္ခက သုဝဏ္ဏသာမ လူဆိုတာ ခွဲခြားတတ်တယ်။ အရင် ပီဠိယက္ခထက် လူကဲခတ် သာတာပေါ့နော်။
ယုံအောင် မလိမ်တတ်ရင် အမှန်အတိုင်းပြောတာက ကုသိုလ် ရတာပေ့ါ။
မြားဒဏ် မထိလည်း သူတို့မိသားစုကတော့ ချစ်ချစ် ခင်ခင်ပါပဲ တဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ
in ဆုထားမျက်ချယ်, ဘာသာပြန် - on 7/22/2012 - No comments
အိန္ဒိယမှာရောင်းမယ့်ကားတွေအတွက် ကားဟွန်းအမာစား၊ အကောင်းတွေအထူးပြင်ဆင်ထားရကြောင်း၊ အိန္ဒိယကားမောင်းသမားတွေဟာ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကားလမ်းကြောင့် လမ်းကြောင်းရဖို့ ကားဟွန်းကို အသည်းအသန် တီးနေရကြောင်း ဂျာမန်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အော်ဒီ ကားကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာက ပြောကြားသွားပါတယ်။
"အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယအတွက် ကားဟွန်းတစ်မျိုးတီထွင်ထားရပါတယ်" လို့ကားကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာ Michael Perchke ကသတင်းစာမှာ မနေ့ကပြော ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
"ဥရောပမှာသုံးတဲ့ကားဟွန်းကိုသာတပ်လို့ကတော့ တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်ဆိုပျက်ပြီ။ အိန္ဒိယမှာ တစ်ရက်ကားဟွန်းတီးတဲ့ အကြိမ်ရေဟာ ဂျာမနီက တစ်နှစ်နဲ့ ညီပါတယ်"
အိန္ဒိယလူချမ်းသာတွေအတွက် နိုင်ငံခြားလုပ်ကားတွေ ဈေးကွက်ပြိုင်ရာမှာ အဆင်ပြေဖို့ ကားဟွန်းအထူးတီထွင်ထားရကြောင်း သူကပြောပါတယ်။
"နှစ်ပတ်လောက်ဆက်တိုက်တီးလို့ရတဲ့ ကားဟွန်းမျိုးဖြစ်ဖို့ အထူးစမ်းသပ်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ကားဟွန်းတည်ဆောက်ပုံ မတူသလို ဆပ်ပလိုင်ယားတွေ လည်းမတူပါဘူး"
အိန္ဒိယ အော်ဒီကားပိုင်ရှင်တွေဟာ အများအားဖြင့် ဒရိုက်ဗာများရှိကြကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ကားနောက်ခုံကနေအမ်ိန့်ပေးလို့ရအောင် ဒီဇိုင်းအသစ်ထွင်ထားကြောင်းလည်း သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယကားလမ်းတွေဟာ သိပ်မချောမွေ့၊ အပေါက်အပြဲအဝေးပြေးလမ်းမ၊ ရွှံ့နွံတွေနဲ့မြို့တွင်းလမ်း ၊ဒီကြားထဲ နွားလှည်းတွေ၊ နွားတွေ၊ဆိုက်ကားတွေ၊ စက်ဘီးတွေကလည်း လမ်းကြောင်းရဖို့အတင်းတိုးဝင် သွားလာနေကြကြောင်းသိရပါတယ်။
သက္ကရာဇ် 2010 မှာ ကားတိုက်မှုကြောင့်လူ 133,938 ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်၊ National Crime Records Bureau အရ တစ်ရက်မှာ လူပေါင်း 366 ယောက်သေဆုံးရပါသတဲ့။
Slice of life.S,T
(အရင်နှစ်ပိုင်းလေးကပဲ ဗုဒ္ဓဂယာကို ဘုရားဖူးကြွတော်မူတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါး ကားတိုက်မှုကြောင့် ပျံတော်မူခဲ့ရတာရယ်၊ မြို့တစ်ချို့ဆို မီးပွိုင့်တောင် တစ်မြို့လုံးရှာမတွေခဲ့တာရယ်ကြောင့် ဒါလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဂယာကို ဘုရားဖူးသွားကြမယ့် ရဟန်းရှင်လူတွေအတွက် ဂရုစိုက်မိကြစေဖို့ပါ။)
ت ဈေးကွက်ရှာသူ ت
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 7/22/2012 - No comments
ဒီ ဆိုးဆေးလေး သုံးကြည့်ပါလား။
ဆံပင် နီတာတွတ် ဆိုးတဲ့
ကျုပ် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဘူး။
ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးပေါ် ဖြန့်ခင်းနေမိသည့် လူပြောသူပြော ဒီမိုကရေစီ
in Politics, ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 7/21/2012 -2comments
ကျနော်တို့ ဘလော့ဂ်မှာ တင်ဖို့ ရွေးထားတဲ့ ကမ်းလက်ရဲ့ ပင်တိုင်စာရေးဆရာများထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆရာဇင်ဝေသော်ရဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီစာမူက The Voice Weekly မှာ ပါလာတော့ ဂျာနယ်လစ်ဇ် သိက္ခာကို စောင့်စည်းတဲ့ အနေနဲ့ Perspective လင့် ကိုပဲ ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ (The Voice ရဲ့ Link ကအလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အတွက် ဒီမှာပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။)
နေပြည်တော်ဘဝက ဈာန်လျောခဲ့ရတဲ့ ရန်ကုန်ကနေ သရဖူဆောင်းထားတဲ့ နေပြည်တော်အသစ်နဲ့ ကုန်းဘောင်မြို့တော်ကြီးဆီ မြင်းဖြူကြီးတစ်ကောင်လို ထွက်ပြေးသွားတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနဲ့ ရေစက်ဆုံရဖို့ အကြောင်းနှစ်ချက်က ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်။ လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ မှတ်ပုံတင်ရုတ်တရက် ရှာလို့မတွေ့တာရယ်၊ မြန်မာပြည်ရောက်တုန်း သူ့ကားကို ကြိုက်သလို၊ ကြိုက်သလောက်သုံးဆိုတဲ့ အကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ရက်ရောမှုရယ်ကြောင့်ပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ (၇) နှစ်ကျော်ကျော် ဝေးကွာနေရသူအဖို့ ရန်ကုန်=မန္တလေးလမ်းမကြီးရဲ့ ဝဲယာရှုခင်းတွေကို တစ်ဝကြီးကြည့်ရှုခွင့်ရဖို့ အခွင့်ထူးကြီးတစ်ခုပါပဲ။
အဲဒီအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကို တစ်ချို့က အဝေးပြေးအမြန်လမ်းမကြီးလို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ တကယ်ဆို ကားကမြန်လို့ရပေမယ့် လမ်းမကြီးကတော့ မြန်လို့မရပါဘူးလို့ ကပ်သီးကပ်သပ်စဉ်းစားမိရင်း Express Way ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကို သတိရမိလို့ ဒီလိုဆိုတော့လည်း ဟုတ်တုတ်တုတ်လို့ တွေးမိတယ်။ ဒီလမ်းမကြီးက တကယ့်ကို အမြန်လမ်းမကြီးပါ။
ဒီလမ်းမကြီးကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်း အမြန်ပြီးအောင် ခင်းထားရပုံလည်းရတယ်။ ကားလမ်းမတစ်ခုမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ မြေတစ်ထပ်၊ ကျောက်ကြမ်းတစ်ထပ်၊ သဲတစ်ထပ်၊ ကျောက်ချော ကတ္တရာတစ်ထပ် ဆိုတာတွေ မတွေ့မိဘူး။ ကားလမ်းမကြီးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ဟာ အရွယ်မတိုင်မီ ဇရာဝင်လာလို့ ပေါက်ပြဲစပြုနေကြပြီ။ အချိန်နဲ့အမှီ ပြီးစီးအောင် အမြန်ခင်းထားရလို့ ဒီလမ်းကို အမြန်လမ်းလို့ ခေါ်ရင်လည်း ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။
ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ၊ အမြန်ခင်းထားတဲ့အတိုင်း အမြန်လည်း ပေါက်ပြဲနေတာမို့ အမြန်လမ်းလို့ ခေါ်မယ်ဆိုရင် ခေါ်လို့ရနိုင်တာပဲ မဟုတ်လား။ ဘယ်လိုပဲ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ကောက် ဒီလမ်းမကြီးဟာ အဝေးပြေး အမြန်လမ်းမကြီးပါ။
လမ်းမကြီးက ဖြောင့်ဖြူးနေရုံတင်မကဘူး၊ သစ်ပင်ဝါးပင်ကြီးတွေပါ ရှင်းနေတော့ (နဂိုက မရှိတာလား၊ ခုတ်လှဲပစ်ထားတာလားတော့ မသိဘူး) ဝဲယာကိုသာမက ရှေ့နောက်ကိုလည်း မျက်စေ့တစ်ဆုံး လှည့်ကြည့်ရတယ်။ ကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီး တော်တော်အဆက်ကျဲနေတာ သတိထားမိလို့ ကားဆရာကို မေးကြည့်တော့ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကုန်တင်ကားကြီးတွေ မောင်းခွင့်မပြုဘူးတဲ့။ အကြောင်းကတော့ အမြန်လမ်းမကြီးပျက်စီးမှာ စိုးရိမ်ရလို့တဲ့။ ကျွန်တော့်အတွက် တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့သတင်း ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီလမ်းမကြီးရဲ့ ဥပဒေအရ ကုန်တင်ကားကြီးတွေဟာ နွားလှည်း၊ မြင်းလှည်းစာရင်းထဲ ပါသွားတော့တယ်။ ကုန်တင်ကားကြီးတွေက ငါတို့မသွားလည်း မင်းတို့လမ်းက ပျက်နေပါပြီကွာလို့ စကားများပြောတတ်ရင် ပြောလေမလားလို့ စဉ်းစားမိရင်း ပြုံးမိသေးတယ်။
ဒါတင်မကပါဘူး၊ ကုန်တင်ကားကြီးတွေ တစ်ဝီဝီပြေးနေတဲ့ စင်္ကာပူ-မလေးရှား အဝေးပြေးလမ်းမတွေ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်းတို့မှာရှိတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေကို မဆီမဆိုင်ပြေးလို့ မြင်မိသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့လမ်းမကြီးရဲ့ ထူးခြားချက်က ကွန်ကရစ်တွေ အပြည့်ခင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကားတာယာတော်တော်ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံပေပဲလို့ တွေးမိပြန်သေးတယ်။ ဒီအတွေးဟာ သိပ်ပြီး ယုတ္တိမရှိလှကြောင်း စင်္ကာပူပြန်ရောက်မှ သိခွင့်ရခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်ကထုတ်တဲ့ ဘိလပ်မြေတွေ သုံးစွဲခွင့်ရအောင် ဘိလပ်မြေပဲ ခင်းထားရသတဲ့။ ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးရမှာပေါ့လေလို့ပဲ အောင့်သက်သက်နဲ့ ယောနိသောမနသိကာရ ပွားလိုက်မိပါတယ်။ ပြည်တွင်းဖြစ် ဘိလပ်မြေကို အားပေးသလို ကားတာယာတွေပါ ပြည်တွင်းမှာထုတ်ပေးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ မဆီမဆိုင်တွေးမိပြန်သေးတယ်။ အဲဒီ ကားတာယာတွေက ဘိလပ်မြေတွေထက် အရည်အသွေး ပိုကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပဲပေါ့။
နှစ်လမ်းပြိုင်ကားလမ်းတွေသာ ခင်းထားပေမယ့် လမ်းမကြီးကို ကြည့်ရတာကတော့ လေးလမ်းပြိုင် လမ်းမကြီးအသွင်ကို ဆောင်နေပါတယ်။ လောလောဆယ် ကားအသွားအလာ၊ ကုန်တင်ကားကြီးတွေ မမောင်းရဆိုတဲ့ ဥပဒေနဲ့သာဆိုရင်တော့ လေးလမ်းပြိုင်စရာ မလိုသေးပါဘူး။ နှစ်လမ်းဆိုရင်ပဲ တော်တော်လေး လုံလောက်နေပါပြီ။
လေးလမ်းခင်းမယ်ဆိုရင်လည်း သိပ်မဆိုးလှတဲ့စိတ်ကူးလို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ အခုမောင်းနေတဲ့ လမ်းတွေပျက်နေတုန်း အသစ်ခင်းမယ့်လမ်းတွေပေါ် ပြောင်းပြီးမောင်းလို့ရတာပေါ့။ ဒီအကြံက အင်တာနေရှင်နယ်တော့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ အင်တာနေရှင်နယ်မဖြစ်လည်း ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။ ဒီလမ်းမရဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ ဘိလပ်မြေတွေကလည်း အင်တာနေရှင်နယ်မှ မဟုတ်တာပဲ။ ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးရဲ့ဝဲယာမှာ ပေါက်တူးလေးတွေနဲ့ ဘာလုပ်နေမှန်းမသိတဲ့ လက်မောင်းပိန်ပိန် အမျိုးသမီးတစ်ချို့ကိုလည်း မကြာမကြာ တွေရတတ်တယ်။ သူမတို့က မြက်ပင်ကို ပေါက်နေကြတာလား၊ မြေညှိနေကြတာလားဆိုတာ မရှင်းလှပေမယ့် မိုင်ငါးရာကျော်ရှည်တဲ့ လမ်းမကြီးကို ထိန်းသိမ်းဖို့တော့ အဲဒီလက်မောင်းလေးတွေရဲ့ ခွန်အားနဲ့ မလုံလောက်နိုင်ဘူး။
စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာက လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ ကားအက်ဆီးဒင့်ကိစ္စတွေပါပဲ။ ကားသမားတွေကို စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ သတိပေးဖို့ အာဏာပိုင်တွေက ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ပုံတူကားချပ်ကြီးတွေနဲ့ ထင်သာမြင်သာအောင် ပြထားတတ်တယ်။ ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းဘူး။
ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတစ်ချို့ဟာ လမ်းမကောင်းကောင်းတွေနဲ့ မထိုက်တန်သေးဘူး။ တဒုန်းဒုန်း ခုန်နေတဲ့ လမ်းပေါ်ကနေ ညက်ညောတဲ့လမ်းပေါ် တင်ပေးလိုက်တော့ ပေါ့လျော့မှု၊ ငိုက်မြည်းမှုတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရင်ဆိုင်တိုက်စရာ ကားမရှိတာတောင် သစ်ပင်ကို ဝင်တိုက်သူက တိုက်၊ အုတ်ခုံကို ဝင်ဆောင့်သူက ဆောင့်၊ ချောက်ထဲကို မောင်းချသူက မောင်းချ။
ကားသမားတစ်ချို့ဟာ လမ်းဖြောင့်လမ်းကောင်းနဲ့ မထိုက်တန်သေးဘူး။ သဘောမတူရင် တောင်းပန်ပါရစေ။
ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့အကြောင်း အခုမှပဲ ရောက်လာပါတော့တယ်။
လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားခွင့်၊ တောင်းဆိုခွင့်စတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဆက်စပ်နေတာတွေကို ပြည်သူကတောင်းလို့ အစိုးရကပေးရင် ရနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရကတော့ ဘယ်အစိုးရဆီမှာမှ မရှိလို့ ဘယ်အစိုးရကမှလည်း ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဖော်ရွေပျူငှာတဲ့ အစိုးရရဲ့ ပုံဆောင်မှုဆိုတဲ့ ဆရာကြီးဆိုကရေးတီးကို ကြိမ်တစ်ချောင်းနဲ့ ထိန်းကြောင်းပေးနေတဲ့ စင်္ကာပူရဲ့ ဒီမိုကရေစီပုံသဏ္ဍာန်က ခပ်ဟဟ ပျက်ရယ်ပြုနေပါတယ်။
တစ်ခါက သမိုင်းနဲ့ အနောက်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုက ဘွဲ့ရထားတဲ့ ဒေါက်တာတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ချာကို မှတ်သားခဲ့ရဖူးတယ်။ သူဆွဲလိုက်တဲ့ ကောက်ချက်က ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာ အာရှနိုင်ငံတွေဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေလောက် အချိန်မကြာဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ စင်္ကာပူတို့ကို ထောက်ပြပါတယ်။ ပြီးတော့ စင်္ကာပူနဲ့ အမေရိကတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်းကာလကို ထောက်ပြတယ်။ အမေရိကရဲ့ ဒီမိုကရေစီက နှစ်ရာချီပြီး ကြာခဲ့ပေမယ့် စင်္ကာပူရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းရေးကတော့ ဆယ်စုနှစ်တွေ အတွင်းမှာပဲ အလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ အာရှတိုက်ရဲ့ မိသားစုဗဟိုပြုယဉ်ကျေးမှု (Family oriented culture) ကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီအကြောင်းပြောရင် အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယကလည်း စွာကျယ်စွာကျယ် ထလုပ်တတ်တယ်။ ပထမဆုံး ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့။
ဒါပေမယ့် နာမည်တူ “ဒီမိုကရေစီ” အောက်မှာ ကွဲပြားနေတဲ့ အသွေးအရောင်တွေ ရှိနေပါတယ်။
စင်္ကာပူရဲ့ ဒီမိုကရေစီက ပြောလို့မရရင် ကြိမ်နဲ့ရိုက်တယ်။ ဘာသာတရားတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြတဲ့ Religious Comparison သင်ခွင့်မရှိဘူး။ လမ်းပေါ်မှာ ဆန္ဒပြခွင့် မရှိဘူး။ ဆန္ဒပြချင်ရင် ခွင့်ပြုမိန့် ယူရတယ်။ သက်မှတ်ပေးထားတဲ့ နေရာမှာပဲ ဆန္ဒပြကြရတယ်။
အိန္ဒိယရဲ့ ဒီမိုကရေစီက လူကို မပြောနဲ့ နွားကိုတောင် ကြိမ်နဲ့ရိုက်ခွင့် မရှိဘူး။ ကမ္ဘာပေါ် ရှိရှိသမျှ ဘာသာတရားတွေအားလုံး အိန္ဒိယမှာ အစပျိုးတယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြတော့ ဘာမှ ပြဿနာမရှိဘူး။ အချိန်မရွေး ကြေငြာပြီး ဆန္ဒပြခွင့် ရှိကြတယ်။ အကြီးအသေးပဲ ကွာမယ်၊ နေ့တိုင်း နေရာတိုင်းမှာလိုလို ဆန္ဒပြမှုတွေ ရှိနေတတ်တယ်။
အိန္ဒိယရဲ့ ဒီမိုကရေစီက ပိုပြီး လွတ်လပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းပေါ်မှာ သွားလာနေတဲ့ နွားတွေက ယဉ်ကြောကို ပိတ်စို့စေတယ်။ နွားချေးတွေနဲ့ လမ်းကို ညစ်ပေစေတယ်။ ထစ်ကနဲဆို လမ်းပေါ်ထွက်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြနေကြတော့ (တစ်ချို့ကိစ္စတွေက ဘာမှ မပြောပလောက်ဘူး) ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေကို ထိခိုက်စေ၊ နွေးကွေးစေတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဆရာကြီးရဲ့ အယူအဆကို သဘောမတွေ့မိတော့ဘူး။ နိုင်ငံရေးပညာရှင်တွေရဲ့ အယူအဆအရ ဘယ်နိုင်ငံက ကျင့်သုံးတဲ့ ဒီမိုကရေစီမှ မပြည့်စုံဘူး။ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ချည်းပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျင့်သုံးရင်း၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွတ်ရင်းနဲ့ ပိုပြီး ရင့်ကျက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဖြစ်အောင် တစ်ဖြည်းဖြည်းပဲ သွားလို့ ရမယ်။ လူထောက်ပြတဲ့ စင်္ကာပူရဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ အမေရိကရဲ့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ တန်ဖိုးခြားနားချက်တွေဟာ အများကြီးပါ။ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ နာမည်တူရုံနဲ့ တန်ဖိုးတူမသွားပါဘူး။
အသောကမင်းကြီးရဲ့ မွေးရပ်မြေမှာ ဆင်းရဲသားဦးရေတွေ၊ အလုပ်လက်မဲ့တွေ၊ အခြေခံပညာ သင်ခွင့်မရတဲ့ ကလေးတွေ တိုးပွားလာတာနဲ့ ဆိုကရေးတီးတို့ ပလေတိုတို့ရဲ့ မွေးရပ်မြေနိုင်ငံကြီး ပုံပျက်ပန်းပျက် ပြိုလဲနေပုံကို ကြည့်ရင်း ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာလည်း လွတ်လပ်တာကလွဲလို့ လိုတရ မန္တာန်တစ်ခု မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သဘောပေါက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယရဲ့ ဒီမိုကရေစီပုံစံက မျက်စိနောက်စရာ ကောင်းသလို စင်္ကာပူရဲ့ ဒီမိုကရေစီပုံစံကလည်း မလွတ်မလပ်နဲ့ ခပ်ကျပ်ကျပ်ပါပဲ။ အမေရိကရဲ့ ဒမိုကရေစီမျိုးဆိုရင်လည်း အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်က ကားအက်ဆီးဒင့်တွေက ခပ်တိုးတိုး သတိပေးနေပြန်ပါရော။
ကျွန်တော်တို့နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မယ့် ဒီမိုကရေစီရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်က ဘယ်လိုများ ဖြစ်လာမှာပါလိမ့်။ ကျင့်သုံးရင်း၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွတ်ရင်းနဲ့ပဲ ပုံပေါ်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အာဏာရှင်တွေ အရှုံးပေးရတာက ဒီမိုကရေစီ။
ဒီမိုကရေစီ အရှုံးပေးရတာက နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု။
နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အရှုံးပေးရတာက ဂလိုဘယ် ဆန်လာမှု။
နုနုနယ်နယ် ဒီမိုကရေစီလမ်းမနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မိတာကတော့ …
၁။ ဖောင်ဒေးရှင်းမကောင်းတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလိုဖြစ်မှာ
၂။ အဆင့်မှီသည်ဖြစ်စေ၊ မမှီသည်ဖြစ်စေ ပြည်တွင်းဖြစ် ဘိလပ်မြေကိုပဲ သုံးရမယ်ဆိုတဲ့ သဘာဝမကျတဲ့ အမိန့်တွေ
၃။ ကားလမ်းမပေါ်မှာ ကုန်တင်ကားတွေ မမောင်းရဆိုတဲ့ အဆင့်ခွဲခြားတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဥပဒေတွေ
၄။ လွတ်လပ်မှုရလေလေ ထိမ်းချုပ်စရာတွေ ပိုများလေလေဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ တန်ဖိုးကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး မေ့မေ့လျော့လျော့နဲ့ လွတ်လပ်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်ရင်း ကြုံတွေ့ရလာနိုင်တဲ့ ကားအက်ဆီးဒင့်လို ဟာတွေ …
ဒါတွေ ဖြစ်လာမှာကိုတော့ စိုးရိမ်မိတယ်။
ကားလမ်းမကြီးက ပြင်လို့ လွယ်ပေမယ့် နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူဝါဒနဲ့ လူထုရဲ့ စိတ်နေစရိုတ်နဲ့ အပြုအမူက ပြင်ဖို့ ခက်တယ် မဟုတ်လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာတွေ ပြောပြောနေတတ်တဲ့ “ငါတို့ မြန်မာတွေ မညံ့ဘူး” ဆိုတာကို ယုံကြည်ထားမိတယ်။
အဲ … ဒီမိုကရေစီ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ကောက်ရိုးပုံဘေး ဆေးလိပ်ထိုင်သောက်တာတော့ မမိုက်လှဘူးပေါ့ဗျာ။
⚑ နိုင်ငံတော်သီချင်းနဲ့ ဟိုရောက် ဒီရောက် ⚑
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 7/20/2012 - No comments
Ref- Sung With National Pride
New York Time Syndicate.
“ကမ္ဘာမကြေ၊ ဗမာပြည်” ဆိုတဲ့စာသားလေးကို ကြည်ြ့ခင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်သီချင်းရှိလာတာ သိပ်မကြာလှသေးဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ နိုင်ငံ့သမိုင်းရှည်မရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းတွေ သိပ်မကြာသေးတာ ဘာမှမထူးဆန်းပေမယ့် ရှည်လျားတဲ့သမိုင်းရှိပါလျှက် ဒီလိုဖြစ်နေရတာက စဉ်းစားစရာဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ထားပါတော့။
လတ်တလောမှာ နိုင်ငံတော်သီချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘောထားကွဲလွဲနေတာလေးတွေ တွေ့မြင်နေရတယ်။ အများအားဖြင့် အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေက နိုင်ငံတော်သီချင်းတွေအပေါ် အလေးအနက်မထားရုံသာမကဘဲ ပျက်ရယ်ပြောင်လှောင်လာကြတဲ့ အမူအယာတွေတောင် တွေ့မြင်နေရတယ်။ အနောက်ဥရောပကလွဲရင်တော့ တော်တော်များများ နိုင်ငံတွေက ဒီအပေါ်မှာ တော်တော်ကို အလေးအနက်ထားကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာပါ။
အရင်လကပဲ ကာဇက်စတန်အစိုးရက နိုင်ငံတော်သီချင်းကို မလေးမစားလုပ်ရင် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိ အပြစ်ပေးဖို့ ဥပဒေထုတ်လိုက်တယ်။ ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း ထုတ်လောက်တဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်က ခိုင်ခိုင်မာမာကြီး ရှိနေခဲ့ပါသတဲ့။
မတ်လက ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ Kostany မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ စကိတ်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲမှာ နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ဖွင့်ရမဲ့အစား ဖွင့်လိုက်တဲ့သီချင်းက Ricky Martin ရဲ့ Livin la Vida Loca ဖြစ်နေပါတယ်။ (အဓိပ္ပါယ်က Living the Crazy Life ပါတဲ့)။ ဒါကို ယူကျုကဖွင့်ချလိုက်တယ်။ တာဝန်ရှိလူကြီးတွေအားလုံး ထိန်းမရ သိမ်းမရ တခွီးခွီးရယ်နေကြရတဲ့ ဗွီဒီယိုကလစ်နဲ့ပါ။
နောက်နှစ်ပတ်ကြာတော့ ကူဝိတ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ ကာဇက်စတန်အားကစားသမားက ဆုရလို့ ဆုယူဖို့ စင်မြင့်ပေါ်ကိုတက်တယ်။ နိုင်ငံတော်သီချင်း ဆိုမယ်လည်းလုပ်ရော နိုင်ငံတော်သီချင်းမဟုတ်ဘဲ ပြောင်လှောင်ထားတဲ့ “Borat” ဆိုတဲ့ သီချင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ပိုပြီးရယ်စရာကောင်းနေသေးတယ်။ “Greatest country in the World, all other countries are run by little girls” တဲ့။
နိုင်ငံတော်သီချင်းတွေ သီကုံးခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ ဒီနေ့က အတော်ပင်ကွာဟနေပြီမို့လို့ အချို့အဓိပ္ပါယ်တွေက ဒီခေတ်လူတွေခံစားလို့မရတော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ချို့တစ်ချို့က ဒီကိစ္စကို အနည်းနှင့််အများ ပျက်ရယ်ပြုကြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်တော်များများကတော့ တကယ့်ကို အလေးအနက်ပါ။
ဒီအချက်ကို ထောက်ဆတော့ “ကမ္ဘာမကြေ” ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သီချင်းက သီချင်းသက်နုပေမယ့် လူထုကခံစားလို့ရပါသေးတယ်လို့ အကောင်းဖက်က တွေးလို့ရသွားပါတယ်။
ဒီကိစ္စက အစ္စရေးမှာလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ခေတ်မမီတော့တဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းကို လက်ရှိ အစ္စရေး- အာရဗီဘာသာစကားနဲ့ အစားထိုးဖို့ အခြေအတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုရမယ့်အချိန်မှာ အစ္စရေးတရားသူကြီးချုပ်က အဓိပ္ပါယ်ဆက်စပ်လို့မရဘူးဆိုပြီး “Jewish soul still yearns” ဆိုတဲ့အပိုဒ်ကို လိုက်မဆိုခဲ့ဘူး။
ဒါကို အခဲမကြေနိုင်တဲ့ သတင်းစာတွေက တရားသူကြီးကို ရာထူးကထွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလာကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ နှစ်ပေါင်း ၁၂၀- ကျော်က ရေးထားတဲ့ “Hatikvah” ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းကို အသစ်ပြန်ရေးသင့်တယ်လို့ အဆိုပြုလာကြတယ်။
ဂျပန်မှာလည်း ဒီပြဿနာက ရှိနေဆဲပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုစဉ် မတ်တပ်မရပ်လို့ဆိုပြီး ခေါ်သတိပေးခံရတဲ့ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမပေါင်း (၅၀၀) ကျော်ရှိခဲ့တယ်။ ဂျပန်ရဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းဖြစ်တဲ့ “kimigayo” ကလည်း ဂျပန်အင်ပါယာခေတ်က သီကုံးထားခဲ့တဲ့သီချင်းပါ။
ဆာဗီးယားမှာလည်း ဒီပြဿနာက ကြုံခဲ့ရပြန်တယ်။ လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ မွတ်ဆလင်ဘောလုံးသမားတွေက နိုင်ငံတော်သီချင်းကို လိုက်မဆိုကြဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အသင်းကနေထုတ်ပယ်တာ ခံခဲ့ကြရတယ်။
ဒါတွေကို ကြည့်ပြန်ရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်သီချင်းဟာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးပါ အခွန်လွတ်နေတဲ့အတွက် လူတိုင်းလိုက်ဆိုလို့ ရနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခါက နိုင်ငံတော်သီချင်းဟာ စကားလုံးတွေကြမ်းတယ်လို့ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ အဲဒီအထင်က အခုမှားပြီဆိုတာ သိရပါတယ်။
ဥပမာ အမေရိကန်တွေရဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုရင် စစ်ပွဲအတွင်း ရေးစပ်ခဲ့တာမို့ စကားလုံးတွေက နူးညံ့မနေပါဘူး။
အထူးသဖြင့်ကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံတော်သီချင်းပါ။ “Marseillaise” လို့ခေါ်ပါတယ်။ သီချင်းသွားက ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရှိသလို စကားလုံးတွေကလည်း ဂျေးနံ့တွေ ထောင်းနေပါတယ်။ “ ……the soldiers of France to water the fields with invaders’ impure blood.. ” တဲ့။
ပြင်သစ်ရဲ့နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ကြည့်လိုက်တော့မှ တို့နိုင်ငံတော်သီချင်းက စကားလုံးတွေ သိမ်မွေ့နေလိုက်တာလို့ တွေးမိလိုက်ပါတော့တယ်။
မပြီးသေးပါဘူး။ အီရတ်ဘက်ကို ဆက်ကြပါဦးစို့။
အီရတ်အစိုးရကလည်း ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ခေတ်ကုန်သွားတဲ့နောက် နိုင်ငံတော်သီချင်းအသစ် သတ်မှတ်ပြဌာန်းဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်။ အောင်မြင်မှုတော့ မရသေးဘူး။ အဓိက အတားအဆီးက ဘာသာစကားပါ။ ဖြစ်သင့်တာကတော့ အာရဗီဘာသာစကားပေါ့။ ဒါပေမယ့် အာရဗီဘာသာနဲ့ဆိုရင် အီရတ် ကာ့(ဒ်) လူမျိုးတွေရဲ့စကားကို အားနည်းသွားစေလိမ့်မယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း အာရဗီဘာသာနဲ့သီချင်းအဆုံးမှာ ကာ့(ဒ်)လူမျိုးတို့ ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ ကာဒစ်ရှိဘာသာ တစ်ကြောင်းစနှစ်ကြောင်းစနဲ့ အဆုံးသတ်ဖို့ အကြံပြုကြတယ်။ အဲသလိုဆိုတော့ အခြားလူမျိုးကွဲတွေကလည်း သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား တစ်ကြောင်းစနှစ်ကြောင်းစ နိုင်ငံတော်သီချင်းထဲ ထည့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလာကြပြန်တယ်။
သူတို့တောင်းဆိုတာတွေကိုသာ ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အီရတ်နိုင်ငံတော်သီချင်းဟာ “အရှည်ဆုံးနိုင်ငံတော်သီချင်း” အနေနဲ့ သမိုင်းတွင်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်သီချင်းထဲကိုပါ တိုင်းရင်းသားတိုင်းရဲ့ ဘာသာစကားတစ်ကြောင်းစီ ထည့်လိုက်ရင် နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုချိန်ဟာ မိနစ်ကိုးဆယ်လောက် ကြာသွားနိုင်လို့ပါ။ အီရတ်နိုင်ငံတော်သီချင်းရဲ့ ရက်ကော့ကို “ကမ္ဘာမကြေ” က သေချာပေါက် ချိုးသွားပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံး အင်္ဂလန်က နိုင်ငံတော်သီချင်းပါ။
“God save the Queen” တဲ့။
ဒီသီချင်းကိုလည်း အင်္ဂလိပ်တော်တော်များများက သိပ်သဘောမတွေ့ကြတော့ပါဘူး။ တစ်ချို့ သရော်စာထဲမှာတောင် ထည့်ရေးတတ်ကြပါတယ်။
သူတို့က သဘောမတူရုံ၊ ခံစားလို့ မရရုံတင်ပါ။
တကယ်လို့ “God save the Queen ” သာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ သီချင်းဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီသီချင်းကိုတော့ သေချာပေါက်ပြောင်းပစ်လိုက်ကြမှာပဲ..လို့ စဉ်းစားမိရင်း…
in ကဗျာ, ဦးကိုမောင် - on 7/18/2012 - No comments
ပိတောက် ပွင့်သစ် မဂ္ဂဇင်း နှစ် ၂၀ ပြည့်ထဲက ပြုံးစရာ ကဗျာ နှစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်မိလို့ ရှဲ လိုက်တာပါ။ ဝိုင်ချိုရဲ့ စိန်ပန်း တမာ နှင့် ကဗျာ ကျောပိုးအိတ် ဆောင်းပါး ထဲကပါ။
မေမေ ပေးလိုက်တဲ့ မီးခြစ်လေးက ပြုံးပြတယ်။ ။
မီးခြစ်က တကယ် ပြုံး မပြုံး မသိပေမယ့် စာဖတ်သူကတော့ တကယ် ပြုံးလိုက်ရပါတယ်။ အပြုံးကိုတော့ အမည်ပေးဖို့ ခပ် ခက်ခက်ပဲ။ ဒါကို မပြုံး လိုက်ရရင် ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။
"တမာ နဲ့ စိန်ပန်း"
တမာ စိန်ပန်း ရောယှက်သန်း၍
စိန်ပန်း တမာ ရောယှက် ဖြာသော်
ဪ တမာ စိန်ပန်း ပါတကား။ ။
မောင်စိန်ပန်း ( တမာမြေ )
Labels: ကဗျာ, ဦးကိုမောင်
in Mr Jam, ဇင်ဝေသော် - on 7/18/2012 - No comments
ကားမောင်းရင်း အမြန်နှုန်း ပိုနေစဉ်၊ ကားမောင်းရင်း ဖုန်းပြောနေစဉ် မော်တော်ပီကယ်နဲ့ တွေ့ရင် လူတွေက တော်တော်လေး ခရီယေးတစ် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့အတွေ့အကြုံတွေကို ပြင်သစ်က မော်တော်ပီကယ် အဲလက်ဇန်းဒါးက မှတ်တမ်းတစ်ခု လုပ်ပြီး ရေးထည့်ထားပါသတဲ့။ အဲ့ဒီအထဲက ဖေးဘရိတ် (၁၀) ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ မဆုံးနိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေ (Undying Friendship)
ကားမောင်းရင်း ဖုန်းပြောနေတဲ့ ကားသမားကို ရဲက တားလိုက်တယ်။ ဒီမှာ သူရှင်းပြတာက “ကျနော့်မိတ်ဆွေဟာ သူ့ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ သူ့ဖုန်းကို ကျနော် မဖြေလို့ မဖြစ်ဘူး” တဲ့။
၂။ အိမ်သာ သွားချင်လို့ပါ (Urgent call of nature)
သူလည်း အမြန်နှုန်း ပိုနေတာပဲ။ သူပြောတာက “ဆောရီးပါဗျာ၊ နည်းနည်း ပိုမြန်နေတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကန်တော့ပါရဲ့... အပေါက်မှာ ပိတ်နေပြီဗျာ (ကိစ္စက ထိပ်ဝ ရောက်နေပြီဗျာ)” တဲ့။
၃။ ယုတ္တိဗေဒ (Question of logic)
“ကျနော် မီးနီကို ဖြတ်လိုက်မိတာက ရှေ့မှန်သုတ်တဲ့ ၀ိုက်ပါက အလုပ် မလုပ်လို့ပါ”။
၄။ ကလေး ညှင်းဆဲမှု (Child torture)
ကလေးက သူ့အမေရဲ့ ပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေတယ်။ တကယ်တော့ ကားနောက်ခန်းမှာ ကလေးထိုင်တဲ့ ခုံပါတယ်။ ဒီလို ပြုမူတာဟာ ကလေးအတွက် ဘယ်လောက် အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြတော့ ကားမောင်းတဲ့ ယောက်ျားလုပ်သူက “သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ကလေးက ခေါင်းမာပါတယ်” တဲ့။
၅။ လက်ပေါက်ကပ် (Quibbling)
“လူကြီးမင်း အဖြူရောင် မျဉ်းကြားကို ကျော်နေပြီ”
“ဘယ်ကလာ အဖြူရောင်ရမှာတုန်း။ မီးခိုးရောင်ပါ”
၆။ တိုက်ဆိုင်မှု (Whatacoincidence!)
“ခင်ဗျား လိုင်စင်ကို ပြပါဦး”
၇။ စိုးရိမ်ရေမှတ် (Feverish concern)
“ကျနော် အရေးကြီးနေလို့ပါ။ ကျနော့်သားက ဖျားနေတယ်။ အန်တောင်အန်တယ်။ ကိုယ်အပူကလည်း သိပ် မြင့်လွန်းနေတယ်”
၈။ ပြောင်လိမ် (Drawingablank)
“လူကြီးမင်း ကားမောင်းရင်း ဖုန်းပြောနေပါလား”
“ရိုးရိုးသားသား ၀န်ခံရရင် ဖုန်းပြောနေမိမှန်းတောင် သတိ မထားလိုက်မိပါဘူးဗျာ”
၉။ မြင်လွယ်တဲ့ အထောက်အထား (Visual navigation)
“ကားအမြန်မောင်းတာကို ကျနော် သဘောကျတယ်။ ကျနော့် မျက်စိတစ်ဖတ် အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ဆုံးပြီးကတည်းက ထိုင်ခုံခါးပတ်လည်း မပတ်ဖြစ်တော့ဘူး”
၁၀။ အနွေးဓာတ် လိုတယ်
“လူကြီးမင်း ကားမောင်းတာ သိပ်မြန်နေတယ်လို့ မထင်ဘူးလား”
“ကျနော် သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှုးဖိနပ်ထဲက ခြေထောက်က အေးခဲနေလို့ပါ”
လူတွေ ဆင်ခြေပေးတတ်ကြရာမှာ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး မတူတတ်ဘူး။ အဲလက်ဇန်းဒါးရဲ့ တော့(ပ်)တင်းမှာတော့ အမျိုးသားက နံပါတ်တစ် စွဲသွားတယ်။
၁) အဖြူရောင်လိုင်းကို ကျော်ခြင်း
“အဖြူရောင်လိုင်းကို ဖြတ်မိတာက မနေ့က လော်ရီကားကြီး ဖြတ်တာကို မြင်လိုက်ရလို့ပါ”
၂) မီးနီကို ဖြတ်ခြင်း
“မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ မီးနီနေတာကို မမြင်ဘူးလား”
“မီးနီတာကို မြင်ပါတယ်။ မမြင်မိတာက ခင်ဗျားကို”
၃) ထိုင်ခုံ ခါးပတ် မပတ်ခြင်း
“ကားနောက်ခန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကလေးမှာ ထိုင်ခုံခါးပတ် ပတ်ပေးမထားပါလား”
“ဘာ... အဲ့ဒါ ကျနော့်ကလေးမှ မဟုတ်တာ။ ပတ်ပေးစရာ မလိုပါဘူး”
၄) ကားမောင်းလိုင်စင် မရှိ
“ကျနော့်မှာ လိုင်စင် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါက အသိမ်းခံထားရလို့။ ထပ်ပြီး စာမေးပွဲ ဖြေပါသေးတယ်။ အမှားက ငါးခုကျော်နေလို့ မရဘူး။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အနှေးနဲ့အမြန် လိုင်စင် ပြန်ရမှာပါ”
၅) အဖြူရောင်လိုင်းကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း
“ကျမကားမောင်းနေတယ်။ မြေပြင်ကို ကြည့်မနေအားဘူး”
၆) မီးနီကို ဖြတ်ခြင်း
ရဲကတားတော့ အမျိုးသမီးက မှန်းတံခါးကို ဆွဲချရင်း ပြောတယ်။ “ကျေးဇူးပြုပြီး ကျမကို အရေးမယူပါနဲ့။ အခု ကျမ ငိုနေတယ်ဆိုတာ ရှင်တို့ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နိုင်ပါတယ်”
ကားပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း ဖုန်းပြောနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကင်းလှည့်လာတဲ့ ရဲကားကိုလည်း တွေ့ရော ပြောနေတဲ့ ဖုန်းကို ချက်ချင်း လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။
“ခင်ဗျားက ကားမောင်းနေတာမှ မဟုတ်ဘဲ”
“ရှင်တို့ မြင်ရင် ကြောက်လွန်းလို့ပါ။ အကျင့်ဖြစ်နေလို့”
“ကား အမြန်မောင်းနေရတာက အိမ်နီးချင်းက တပူဆာဆာ လုပ်နေလို့ပါ”
သူ့ကား နောက်ခန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ အိမ်းနီးချင်း အမျိုးသမီးက ထောက်ခံတယ်။
“ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ သူမပြောတာ အမှန်ပါ” တဲ့။
၉) ထိုင်ခုံခါးပတ် မရှိခြင်းအကြောင်း
ကားနောက်ခန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်း ထိုင်ခုံခါးပတ် ပတ်ပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ကားမောင်းနေတဲ့ အမျိုးသမီးကို ရှင်းပြတော့ သူမက
“စိတ်မပူပါနဲ့။ မကြာခင် နှစ်တွေမှာ သူတို့ ဒဏ်ငွေကို သူတို့ ဆောင်ကြပါလိမ့်မယ်”
၁၀) လျပ်စစ် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်
အဲ့ဒီဆင်ခြေတွေထဲမှာ ရီစရာ အကောင်းဆုံးကတော့
“ကားမောင်းရင်း ဖုန်းပြောနေတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်က ကျနော်တို့ကိုလည်း တွေ့ရော ဖုန်းပြောနေတာကို ရပ်ပြီး သူ့ဟန်းဖုန်းကို မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်လို ဟန်ဆောင်ပြီး မုတ်ဆိတ်ရိတ်သလို ပွတ်နေပါရောလားဗျာ”
ကမ္ဘာကျော် အင်တာဗျူး ၂
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 7/17/2012 - No comments
♡ ဘလိုင်း ချစ် ♡
ဘလိုင်း ချစ် ။ ။ ဗုဒ္ဓ ရေ။ ကျုပ်ကတော့ "Love is blind" ကို သဘောကျသဗျ၊ ဗုဒ္ဓက ဘယ်လိုထင်တုန်း။
ဗုဒ္ဓ ။ ။ မှန်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် Love တစ်ခုတည်း ခွဲပြောရင်တော့ တစ်မျိုးလေး ပဲ ဗျ။ ဗုဒ္ဓ ကတော့ Hatred ရော Ignorance ပါ ဘလိုင်း လို့ ထင်တယ် ဗျ။ ဒါကြောင့် "လောဘော အတ္ထံ န ဇာနာတိ၊ ဒေါသော အတ္ထံ န ဇာနာတိ၊ မောဟော အတ္ထံ န ဇာနာတိ" လို့ ဆိုခဲ့သဗျာ။ ခင်ဗျား စကားငှားပြောရရင် "Love is blind, Hatred is blind, Ignorance is blind" ပေါ့လေ။
♡ ရိုမက်တစ် ချစ် ♡
ရိုမက်တစ် ချစ် ။ ။ ကျုပ်ကတော့ "Love at first sight" ကိုပဲ ယုံကြည်တယ် ဗျာ။
ဗုဒ္ဓ ။ ။ မှန်တာပေါ့ဗျာ ။ ကျုပ် ပြောခဲ့သားပဲ "ပုဗ္ဗေဝ သန္နိဝါသေန" ဆိုတာလေ။ ရှေး ရေစက်ကြောင့် မြင် မြင်ချင်း ချစ်တတ် မုန်းတတ်ကြပါတယ်။ မမြင်ရပေမယ့် ဒါတွေ ရှိတယ်။
♡ ကက်ကူလေးတစ် (Calculative) ချစ် ♡
ဘလိုင်း ချစ် ။ ။ ကျုပ်ကတော့ "Love is nothing but responsibility." ပဲဗျို့။ စီးပွားရေး ဆန်တယ်ပဲ ဆိုဆို။
ဗုဒ္ဓ ။ ။ မဆန်ပါဘူး ဗျာ။ ဗုဒ္ဓ ကတော့ "ပစ္စုန္န ဟိတေနဝါ" လို့ ဆိုခဲ့သဗျာ။ ပစ္စုန် မှာလည်း တစ်ယောက် အကျိုး တစ်ယောက် သယ်ပိုးမှ ရှေး ရေစက် အချစ်က မြဲတာပါ။ ဒါကလည်း ဝတ္တရား ကျေမှုပဲ မဟုတ် လား။
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ၁ ။ ။ ကျုပ်ရဲ့ အဓိက အဆုံးအမ ကလည်း လူ အချင်းချင်း မေတ္တာ ထားကြဖို့ပါ။
ဗုဒ္ဓ ။ ။ ကောင်းတယ်ဗျာ၊ ဒါပေသည့် အဟိတ် တိရိစ္ဆာန်တွေလည်း ကျုပ်တို့ မေတ္တာကို ခံယူထိုက်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ အချင်းချင်း မေတ္တာထားပြီး ငါးမျှား အတူတူ ပျော်ပျော်ကြီး ထွက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးလေး ထင်တယ် ဗျို့။
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ၂ ။ ။ ကျုပ်ကတော့ ထောက်ပံ့နိုင်မယ်ဆိုရင် မိန်းမ သုံး လေး ယောက် ယူခွင့် ပြုထား တယ်ဗျ။
ဗုဒ္ဓ ။ ။ ကောင်းတယ်ဗျာ၊ ကျုပ်လည်း "ပုတ္တဒါရဿ သင်္ဂဟော" ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထောက်ပံ့ ဆိုရာမှ
Financial support လို့ ရှိရဲ့ မဟုတ်လား ။
ချမ်းသာတဲ့ လူမို့ ဇနီး သုံး လေးယောက်ကို Financial support အပြည့် အဝ ပေးနိုင်မယ် ဆိုရင်တောင် Emotional support ကိုအပြည့် အဝ ပေးနိုင်ဖိုတော့ စဉ်းစားစရာ ပဲ ထင်တယ် နော် ။
ဒါက ဗုဒ္ဓရဲ့ အယူအဆ သက်သက်ပါ။ စိတ်မရှိပါနဲ့ ဗျာ။
¿ ဘူလေး လဲ ¿
in ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 7/17/2012 - No comments
မေးမနေနဲ့၊ ဘူမှ မသိဘူး။
အဲဒါ မြောက် ကိုရီယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျွန်အန် နဲ့ အတူ နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာကနေ တီဗွီမှာ မိတ်ဆက်ပေး လိုက်တဲ့ ကောင်မလေး။
သူမ နာမည် ဘူလဲ၊ ဘူမှ မသိဘူး၊ သူမ နဲ့ သူ နဲ့ ဘာတော်လဲ၊ ဘူမှ မသိဘူး။ လူတွေ သိတာဆိုလို့ သူမကို တီဗွီထဲမှာ သုံးခါ မြင်ဖူးတယ်၊ ဒါပဲ။
တနင်္ဂနွေနေ့က ကင်ဂျွန်အန်မူကြိုကျောင်းကို သွားလည်ပတ်တဲ့ အကြောင်း ဖော်ပြတဲ့ အခါ သူမကို မြင်ရပြန်တာ တဲ့။
ခက်တာက ဘယ်တုန်းက သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြောမထားတော့ ဘာမှ သိလို့ မရပြန်ဘူး။
ထိပ်တန်း အရာရှိကြီးတွေတောင် သူ့ အနား မကပ်ရဲဘဲ ကောင်မလေးက သူ့ဘေးမှာ တွေ့ရတော့ သူ့ ဇနီးများ ဖြစ်နေမလား လို့တွေးစရာတော့ ရှိတာပေါ့။
မြောက် ကိုရီယား ယဉ်ကျေးမှုအရ သူမအတွက် ထိုင်ရမယ့် နေရာ ချထားစီစဉ်မှုတွေကြည့်ရင် သူ့ ဇနီးဖြစ်ဖို့ များ သတဲ့။
သူမ မှလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ မြောက် ကိုရီယား နိုင်ငံသားတွေဟာ သူတို့ နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ အသက်ကိုတောင် တိတိကျကျ မသိကြရ ရှာဘူး။ လိတ် တွမ်တီး ဆိုတာလောက်ပဲ သိရတယ်။ အဲဒါ မြောက် ကိုရီယား မီဒီယာပဲ။
ကမ္ဗောဒီးယာမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အာစီယံ အစည်း အဝေး မှာ ကင်ဂျွန်အန် လက်ထပ်လိုက်ပြီလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကိုမေးတော့ သူက ဖြေမသွားဘူးတဲ့။ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကိုလည်း ပယ်ဖျက် သတဲ့။ ဒီမေးခွန်း ထပ်မေးမှာ ကြောက်လို့ နေမှာပေါ့။
တောင်ကိုရီယား မီဒီယာကတော့ နည်းနည်း ပိုသိ သလိုလိုပဲ၊ အဲဒါ ဆွစ်ဇာလန်မှာ ကျောင်းတက်စဉ် သူနဲ့ ရင်းနှီးဖူးတဲ့ အဆိုတော် ဟျွန်ဆောင်ဝူး ဖြစ်မယ်။ သူတို့ လက်ထပ်လိုက်တာ ဖြစ်မယ် တဲ့။
ဒါကို လက် မခံ နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီ ကောင်မလေးဟာ အသက် ၂၄ နှစ်ရှိ(ခန့်မှန်းခြေ) မြောက် ကိုရီယား ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ညီမလေး ဖြစ်ရမယ် တဲ့။
ဘာမှ မဟုတ်ဘူး၊ မြောက်ကိုရီယား နဲ့ ခေါင်ချင်း ဝင်တိုက်မိရင် ကိုယ်ပဲ ကွဲမှာ ဆိုတာ စဉ်းစားမိလို့ပါ။
သူတို့က ပိုမာတယ်။ သတင်း မီဒီယာက အစ ဘာမှရှင်းရှင်း လင်းလင်း မရှိဘူး။
ဘူလဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘောက် ရှိပြီလဲ၊ ဘိုလဲ၊ ဘူမှ မသိဘူး။ ပျော်စရာ ကြီး။
အယ်ဒီဆင်ကို ဟောခဲ့သည့် အရှည်သုံးပါးတရားတော်
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 7/16/2012 - No comments
(ဓမ္မပဒ၊ ဗာလဝဂ်လာ ပထမဆုံး ဤ ဂါထာကိုကြည့်ကာ လတ်တလော ကြုံတွေ့နေရသော အဖြစ် အပျက်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့် ဂါထာတစ်ပုဒ် ပုံစံတူ ကူးပြီး ဤ စာကို ရေးလိုက် မိပါသည်။ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် တွေးက ဘုရားရှင်နှင့် ဒေသနာ တော်ကို မလေးမစားလုပ်သည် ဟူသော အခြား အဓိပ္ပါယ် တစ်ခုလည်း ရှိကောင်း ရှိသွားနိုင်ပြန်ပါသည်။ ဤသို့ တွေးမိသူများ စိတ် မချမ်းမြေ့ဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ခဲ့သော် တောင်းပန်ပါ၏။ သီဟနာဒ။)
ခရီးပန်းလာသူအတွက် တစ်ယူဇနာခရီးသည် ရှည်၏။
သူတော်ကောင်းတရားကို နားမလည်သော သူမိုက်အတွက် သံသရာသည်ရှည်၏။
“Long is the night to one who is wakeful;
Long is (the journey of) one yojana to the traveler who is tired;
Long is Samsara to the fool who is the ignorant of the true of Dhamma.”
“မီးပျက်၊ မီးမရှိသူများအတွက် ညတာသည်ရှည်၏။
သယံဇာတကို ရောင်းစားသူများအတွက် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ခရီးသည်ရှည်၏။
မိမိတိုင်းပြည်၏လိုအပ်ချက်ကို မသိနားမလည်သော သူမိုက်တို့အတွက် နောင်တတရားသည်ရှည်၏။
“Long is the night to those who have no light;
Long is the journey of having light to those who sell their oil and gas;
Long is the regret to the fools who are ignorant of their country’s need!”
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် နံနက်စောစော သမာပတ်မှထတော်မူပြီး မည်သူ့ကို ချေချွတ်ရအံ့နည်းဟု ကြည့်ရှုဆင်ခြင်တော်မူလတ်သော် စိတ်လက်မသာ ညှိုးမှိုင်ကာနေရှာသော သောမတ်(စ်) အယ်(လ်) ဘာ အယ်ဒီဆင်ကို မြင်တော်မူလေ၏။
ထို့ကြောင့် အလုပ်အကျွေးရဟန်းမပါ၊ တစ်ကိုယ်တည်းသာလျှင် ပရိက္ခရာတို့ကို ယူဆောင်တော်မူပြီး သောမတ်အယ်ဒီဆင်ရှိရာ နယူးဂျာဆီမြို့ရှိ မင်လိုပါ့ခ် (Menlo Park) အလုပ်ရုံဆီသို့ ကောင်းကင်ခရီးဖြင့် ကြွတော်မူလေ၏။ ထိုနေရာသို့ရောက်သော်လည်း အပွိုင့်မန့်ကြိုတင်လုပ်ထားခြင်း မရှိသဖြင့် သူ့အလုပ်ထဲသူအာရုံနစ်နေသော အက်ဒီဆင်က ဘုရားရှင်ကို မမြင်မိပေ။ ဘုရားရှင်က ချောင်းဟန့်သော်လည်း နားလေးသော အက်ဒီဆင်က မကြားရှိလေ၏။
ရောင်ခြည်တော်များ ဖြန့်လွှတ်ရန်ကိုမူ ကမ္ဘာကို အလင်းပေးခဲ့သော ဒကာကြီးအရှေ့၌ မပြုအပ်ဟု ဘုရားရှင်က ယူဆတော်မူလေ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်သည် မိနစ် (၂၀) ခန့် မတ်တပ်ပင် သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့ရ၏။ ထိုအခါ ဆေးပြင်းလိပ်တစ်လိပ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်လိပ် မီးညှိဖို့လုပ်စဉ် ဒကာတော် အယ်ဒီဆင်သည် ဘုရားရှင်ကို တွေ့မြင်သွားလေတော့၏။
ဘုရားရှင်ကို မြင်လျှင်မြင်ချင်း အယ်ဒီဆင်၏မျက်နှာပေါ်၌ အနည်းငယ် ကျေနပ်သည့်အသွင်များ ရောက်သွားပြီး-
“ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ ထင်ပါရဲ့၊ ကြွရောက်တော်မူပါ။ အလုပ်ရုံဖြစ်နေတဲ့အတွက် ခမ်းခမ်းနားနား နေရာထိုင်ခင်းမပေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ” ဟု ခပ်ကျယ်ကျယ်ဆိုလေ၏။ ဘုရားရှင်ထိုင်လျှင်ထိုင်ချင်း သူသိလိုသောမေးခွန်းကို မေးလေတော့၏။
“ဂေါတမ ဗုဒ္ဓရေ၊ ကျုပ်လျှပ်စစ်မီးတည်ထွင်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း (၁၃၀) ရှိပေါ့။ ကျုပ်စိတ်ကူးထဲမှာတော့ သက္ကရာဇ် (၂၀၀၀) ဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံး လျှပ်စစ်မီးတွေ ထိန်ထိန်လင်းနေလိမ့်မယ်လို့ တွက်ဆထားခဲ့တာ။ မှားသဗျာ။ ကျုပ်တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါရဲ့ ဂေါတမဗုဒ္ဓရယ်။
သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်ရှင် ဘုရားရှင်သည် အယ်ဒီဆင်၏ သောကအကြောင်းတရားကို သိမြင်တော်မူသော်လည်း သူ့ရင်မှာစိုက်နေသော သောကဆူးငြှောင့်ကို နှုတ်ရန်အလို့ငှာ-
“ဒကာကြီး အယ်ဒီဆင်၊ အဘယ့်ကြောင့်များ စိတ်လက်မသာရှိနေရပါသနည်း”
“အခု သက္ကရာဇ် ၂၀၁၂- ခု ရောက်နေတာတောင် အာရှတိုက် အရှေ့တောင်အရပ်က နာမည်နှစ်ခုနဲ့နိုင်ငံဟာ မီးမရသေးဘူးတဲ့ ဂေါတမဗုဒ္ဓရယ်။ ကျုပ်အဲဒီအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာပါ။ လောင်စာဆီမရှိလို့များလားလို့ တွေးမိပါရဲ့။ ဒါလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ သူတို့က လောင်စာဆီကို သူများကိုတောင် ပြန်ရောင်းစားနေကြသတဲ့။ ဗုဒ္ဓကတော့ လိမ်ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျုပ်ကြားထားတဲ့ သတင်းတွေက အမှန်တွေပဲလား။ မယုံနိုင်လွန်းလို့ပါ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓရယ်”
“ဒကာကြီးကြားတဲ့ သတင်းတွေဟာ အမှန်တွေပါပဲ။ ဒကာကြီးတီထွင်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း (၁၃၀) ကျော်ပေသည့် ထိုနိုင်ငံလေးခမျာမှာတော့ မီးပုံမှန်မရကြသေးပါ။ ထို့အတွက် သင့်ထံ ဗုဒ္ဓကြွရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို လျှပ်စစ်မီးနဲ့လင်းစေဖို့ သင်အချိန်တွေ၊ ခွန်အားတွေ ဘယ်လောက်စိုက်ခဲ့ရသည်ကို ဗုဒ္ဓသိသည်။ ထို့အတူ ဗုဒ္ဓ၏ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးကို ဒကာကြီးကို ပြောပြချင်သည်။
ဂေါတမ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ပင် ကမ္ဘာကြီးကို သစ္စာအလင်းများဖြင့် လင်းစေအံ့ဟု နှလုံးပိုက်ပြီး ထိုအလင်းကို ရရှိစေဖို့ လေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းကြာအောင် ရီဆာ့ခ်ျ (Research) လုပ်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် ထိုသစ္စာအလင်းသည်လည်း သက္ကရာဇ်နှစ်ထောင်ကျော်သည့်တိုင် ကမ္ဘာ့ဒေသအများစု၌ မရောက်ရှိ၊ မဖြန့်ကျက်သေးပေ။ ထို့ကြောင့် စိတ်ပျက်ရမည်ဆိုလျှင် ဂေါတမ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ပျက်ရပေတော့မည်။ ဒကာကြီးမှ မဟုတ်ပါ။
“ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓ၏ Very First ဒေသနာတော်၌ ယံပိစ္ဆံ န လဘတိ၊ တမ္ပိ ဒုက္ခံ ဟု မိန့်ခဲ့သည်။ အဓိပ္ပါယ်ကား - This is suffering when dreams do not come true.’ ဖြစ်ပေသည်” ဟု ရှည်လျားစွာ မိန့်တော်မူ၏။
ထိုအဖြစ်အပျက်ကို ကြားလိုက်ရသော အယ်ဒီဆင်သည် ဘုရားရှင်၏ သစ္စာလေးပါးရှာဖွေရေးကား မိမိထက် အဆများစွာရှည်ကြာ၊ အဆများစွာ ပိုမိုပင်ပန်းခဲ့ရကြောင်းကို သဘောပေါက်ပြီး စိတ်သက်သာရာ အတန်ငယ်ရရှိလေ၏။
အယ်ဒီဆင်၏စိတ်သည် ယခုအခါ တရားနာရန်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီဆိုသည်ကို သိမြင်တော်မူသော ဘုရားရှင်သည် ဓမ္မပဒ ဗာလဝဂ်လာ မူရင်းဂါထာတော်နှင့်အတူ ဂါထာတစ်ပုဒ်ပါဖြည့်စွက်၍ မိန့်မြွက်တော်မူသည်။
ပထမဂါထာတော်အပြီးတွင် အယ်ဒီဆင်သည် စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိယုံသာမက အသိ ဉာဏ်များပင် လင်းလက်လာလေတော့သည်။ ထိုအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံသော ဘုရားရှင်သည် အယ်ဒီဆင်ကို တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းပြီး ဂါထာအသစ်တစ်ပုဒ် ထပ်ဟောလေသည်။
ဒုတိယဂါထာ နယူးဗားရှင်း၏အဆုံး၌ အယ်ဒီဆင်သည် ကမ္ဘာ့အလင်းသာမက အဇ္ဈတ္တအလင်းပါ ရရှိသွားလေတော့သည်။
လေးသိန်းရှစ်သောင်းကုန်သော အမေရိကန်တို့လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် ခံယူကြလေကုန်၏။
အမှာ- ပထမဂါထာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်သည် ဒေါ်မြတင်၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်မှ ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
☁ နေမင်းပြုံးမယ့် နေ့ ☼
in ပိတုန်းတစ်ကောင်ထုဆစ်တဲ့..., အလင်္ကာသံစဉ်များ - on 7/16/2012 - No comments
သင့် မှာ ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိရင်
သူသေ ကိုယ်သေ လောင်းကြေးထပ်ဖို့
"လက်ရှောင်၊ ပေါက်ကောင် ဖော်မယ်" တဲ့။
ကိုနေဝင်း၊ကိုခင်ဝမ်း တို့ရဲ့" နေမင်းပြုံးမယ့်နေ့" များ ဖြစ်ခဲ့ရင်
အသေးမွှားဆုံး တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခုထက်
အဓိပ္ပါယ် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါ။
Labels: ပိတုန်းတစ်ကောင်ထုဆစ်တဲ့..., အလင်္ကာသံစဉ်များ
☺ ကိုယ့် အထာနဲ့ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်လည်း ဘလော့ဂါပဲ ☺
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 7/15/2012 - No comments
မသိဘဲ ရမ်း မပြောနဲ့
အတင် အသ မတတ်လို့ကတော့
ကဗျာနတ်ကလည်း ကြီးမှကြီး ရယ်။
သိသိ သာသာ တက်လာကြ သတဲ့
အသား မရှောင်ဘူး ပြောလို့
"သစ်သား"တော့ ချက်မကျွေး နဲ့ ဗျာ
ဝါးရတာ တကယ် မချောင်ဘူး။
ထိပ်ပြောင်နေတဲ့ ခေါင်းတွေ မြင်တိုင်း
"ဆံပင်" တူး တူး ပြီး စိုက်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာလို့
မနည်း ထိန်း ထိန်း ထားရတာ။
အသက် သုံးဆယ် ကျော်ကတည်းက
အဖြူရောင် တော်လှန်ရေး စစ်စစ် ပဲ
ကိုယ် သစ် တိုင်း မသစ်တဲ့ အထဲမှာ
ကိုယ့် မျက်နှာက စပြီး သစ္စာဖောက်တယ်
ဘယ်လောက်သစ်သစ် ဒီ မျက်နှာအဟောင်းနဲ့။
ငြိသလောက် လေး ရေးတယ်
သိသလောက် လေး ရေးတယ်
(တင်ပေး ရိုက်ပေးသူ ရှိရင်)
ကိုယ့် အထာနဲ့ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်လည်း ဘလော့ဂါပဲ။ ။
လူကောင်းများပင် လိုက်မိတတ်သည့် အဂတိ
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 7/14/2012 - No comments
အဂတိတရားလေးပါးကို မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းသိကြသည်။ ချစ်၍ အဂတိလိုက်၏၊ မုန်း၍အဂတိလိုက်၏။
ကြောက်၍ အဂတိလိုက်၏။ မသိ၍ အဂတိလိုက်၏။ ရှေ့ သုံးပါးသော အဂတိကို သူတော်ကောင်းများ ရအောင် ရှောင်နိုင်ကြ၏၊
နောက်ဆုံး အဂတိ ကမူ သူတော်ကောင်းရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်တော့ပေ။
ဤ၌ မသိခြင်းဟူသည် သစ္စာလေးပါးနှင့် မဆိုင်တော့၊ အမှု အခင်း ရေးရာကို ကျကျ နန မသိခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် စိတ်ရင်း ကောင်းသူများပင် လွန်ကျူးမိတတ်တော့၏။ မသိ ဆိုရာ၌ သတင်း အချက် အလက်၊ အထောက် အထား မပြည့်စုံခြင်း၊
ပြည့်စုံပါသော်လည်း သုံးသပ်မှု လွဲချော်တတ်ခြင်း တို့ ဖြစ်နိုင်ပြန်သည်။ မည်သို့ ဆိုစေ မတရားမှု ဖြစ်လျှင် အဂတိ သာဖြစ်တော့၏။
ကိုယ်တိုင် မရိုးသားသဖြင့် ဖြစ်ရသော အဂတိ က ကိုယ်တိုင်သိသော်လည်း အချက် အလက် မမီ၊
ဉာဏ် မမီ၍ ဖြစ်ရသော အဂတိ က ကိုယ်တိုင်ပင် မသိတတ်။ နစ်နာလှ၏၊ ရိုးသားသော အဂတိ ဖြစ်၏။
လောက၌ "မသိလို့ မှားမိတာပါ" ဟု ခွင့်လွှတ်လို့ရ၏။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဒေသနာ ၌မူ မသိခြင်းကို "မသိရှာ လုိ့ပါ" ဟု မပြော မဟောခဲ့။
ဘဝ သံသရာ၊ ဘဝ ဒုက္ခ၏ ပင်မ ကြောရိုးဟု မှာတမ်းရှိခဲ့သည်။
ရိုးသားလျက် မှားတတ်သော မောဟာဂတိသည် ကြောက်မက်ဖွယ် အကောင်းဆုံးဟု ကြည့်မိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်တိုင် အဂတိ လိုက်နေမှန်း မသိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကိုယ်တိုင် မှန်သည်ဟု ထင်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ရိုးသားသော အဂတိ။ ရိုးသားမှုက ရိုးသားမှု၊ အဂတိက အဂတိ။
သတိ၊ ပညာမှ လွဲ၍ ကုစားထုံး မရှိ။ တိလောက ဂုရု ကို ဦးညွှတ်မိပါ၏။ ။
ပွင့်သွားတဲ့ စွမ်းအင် တံခါး နဲ့ လူပြော သူပြော အသံများ
in Politics, ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 7/14/2012 - No comments
"မည်းမှောင်နေတဲ့ အတိတ်က လာခဲ့ရတော့
တောက်ပ လှတဲ့ အနာဂတ် လိုလို..."
Ref: Thein Sein meets US business leaders.
A delicate balance with deft move.
မနေ့က သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် နဲ့ အမေရိကန် ထိပ်တန်း စီးပွါးရေး ခေါင်းဆောင်များကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဟယ်လာရီ ကလင်တန် က ကမ္ဗောဒီးယား နိုင်ငံ၊ ရှမ်းမ် မြို့မှာ တွေ့ဆုံ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ "နိုင်ငံ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အနာဂတ် အစီအစဉ်တွေ အားလုံး သူတို့ကို ပြောပြနိုင်ပါတယ်"လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး က ဆိုပါတယ်။ ဒီ အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရက် ပိုင်း အတွင်း သွားရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။
အိုဗားမား အစိုးရ ရဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက် မကျခင်မှာ
၁။ အမေရိကန် စီးပွားရေးသမားများရဲ့ မြန်မာ့ ဈေးကွက်ထဲ လက်ဦးမှု ရယူလိုခြင်း၊ ဆုံးရှုံးမှာ စိုးရိမ်ခြင်း။
၂။ လူ့ အခွင့် အရေး အဖွဲ့များရဲ့အထပ်ထပ် စိုးရိမ် သတိပေးခြင်း။
၃။ မြန်မာ အစိုးရ ရဲ့ အမေရိကန် စီးပွားရေး လက်တွေ့ ကျကျ ပါဝင်လာဖို့ အထပ်ထပ် ဖိတ်ခေါ်နေ ခြင်း တွေနဲ့ ဗျာများနေခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကတော့ စည်းကမ်းချက် အသစ်တွေနဲ့ အတူ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေနံ နဲ့ စွမ်းအင် ကိစ္စမှာ အမေရိကန် စီးပွားရေး ပါဝင်လာတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြားရတဲ့ အသံတွေကတော့ တော်တော် စုံလင်လှပါတယ်။
ဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့ Macquarie တက္ကသိုလ်၊မြန်မာ့ စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်သူ ဒေါက်တာ Sean Turnell ကတော့ "The United States has moved very adroitly. Everyone gets something I think, hopefully to the benefit of Myanmar's reform process." အမေရိကန် က တော်တော် မြန်မြန် လှုပ်ရှားလိုက်ပြီး ဒီ လှုပ်ရှားမှုက မြန်မာ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး အတွက် လူတိုင်းကို တစ်ခုခုတော့ ရစေနိုင်လိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် လို့ ဆိုထားပါတယ်။
အခွင့် အရေး ဆိုင်ရာအဖွဲ့များထဲက အမေရိကန် မြန်မာ့ ကမ်ပိန်း အဖွဲ့ကတော့ ဒီ လှုပ်ရှားမှုဟာ "a betrayal of human rights groups" လူ့ အခွင့် အရေး အဖွဲ့တွေကို သစ္စာဖောက်မှု လို့ စွပ်စွဲ ထားပြန်ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရ ဟာ စီးပွားရေးကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီး လူ့ အခွင့် အရေး ကိုတော့ မျက်ကွယ်ပြုထားတယ်ဆိုပြီး လူ့ အခွင့် အရေး ချိုးဖောက်မှု၊ မြေယာများ ပြည်သူပိုင်သိမ်းမှု စတာတွေကိုထောက်ပြကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် သတိပေးခဲ့တာကိုရော ချိုးဖောက်ရာ ရောက်မသွားဘူးလား လို့ မေးစရာလည်း ရှိလာပြန်ပါတယ်။
ဒါကိုတော့ ဒေါက်တာ တန်နယ်ကပဲ "သူမ စိုးရိမ်တာတွေ မဖြစ်စေဖို့အမေရိကန်အစိုးရ ဟာ သူတို့ ကုမ္ပဏီတွေကို လိုအပ်တဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေ ပေးထားပါတယ် " လို့ ရှင်းပြခဲ့ပြန်ပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရ အနေနဲ့ ဝေဖန်နေသူတွေကြားက စီးပွားရေးတံခါးကို အမြန်ဖွင့်လိုက်ရတယ် ဆိုပေမယ့် မြန်မာ အစိုးရ အတွက်ကျတော့ ဒါက နည်း လည်းနည်း၊ နှေးလည်းနှေး ဖြစ်နိုင်ပြန်ပါရော၊ မြန်မာ အစိုးရ အမှန် မျှော်လင့်ထားတာက မြန်မာ့ ထုတ်ကုန်တွေတွေ အမေရိကန်ထဲကို တင်သွင်းခွင့် ပြုဖို့ လို့ အရှေ့တောင် အာရှ လေ့လာသူ Mr Murray Hiebert က ဆိုထားပြန်ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော အမေရိကန်တွေ တကယ်ဝင်လာရင်တော့ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေကိုလည်း တပ်လှန့်ပြီးသားပါ။ မြန်မာ့ ဆင်းရဲတွင်းက တော်တော် နက်လေတော့ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ "အပေး အကမ်း ကပဲ နည်းတာလား၊ အစား အသောက်ကပဲ ကြီးတာလား " ဆိုတာလေးကို မဆီမဆိုင် သတိရ မိသေးတယ်။ "မည်းမှောင်နေတဲ့ အတိတ်က လာခဲ့ရတော့ ခပ်မှိန်မှိန် ပစ္စုပ္ပန်ကိုပဲ တောက်ပ လှတဲ့ အနာဂတ် လိုလို" တဲ့။
ဘာ ပြောပြော မနှစ်ကထက်သာတယ်။ ပြောချင်ရာ ပြောကြ။
"သမ္မတကြီး ဆွဲတဲ့ နိုင်ငံတော် ကောက်ကြောင်း"
in Politics, ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 7/13/2012 - No comments
Interview by Nirmal Ghosh
The Straits Times (13-Jul-2012)
၁။ ကက်ဘိနိတ် အပြောင်း အလဲ
"It is not the case that there are hardliners in the Cabinet who are actively resisting or against changes or reforms, but there are some in the Cabinet who may be slower or who may not be performing as well in terns of trying to realise the objectives the government set out. Because of that ,there may need to be changes."
"ပါလီမန်အမတ်တွေထဲမှာ ပြောင်းလဲရေးကို မလိုလား ဒါမှမဟုတ် ပြောင်းလဲရေးကို အတိုက်အခံ လုပ်နေသူတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာက ပြဿနာမဟုတ်၊ ပြောင်းလဲရေးကို နှေးကွေးစေသူ၊ အစိုးရ ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒ အတိုင်း နားလည်မှု ရှိရှိနဲ့ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သူတွေတော့ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကက်ဘိနိတ်ထဲမှာ အပြောင်း အလဲ တွေ ရှိလာနိုင်တယ်" လို့ဆိုထားပါတယ်။
အင်တာဗျူးက စကားပြန်နဲ့ ဗျူးခဲ့ရပေမယ့် သတင်းထောက်ကတော့ သမ္မတကြီးဟာ Relax, chatty ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ နောက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တဖြစ်လဲ သမ္မတကြီးဟာ နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို ကျကျ နန သဘောပေါက် ထားပြီး ဒီအပေါ်မှာလည်း ရိုးသားမှု အပြည့်ရှိတယ် လို့ မှတ်ချက် ပြုထားပါတယ်။
၂။ ပြည်သူရဲ့အသံကို နားစိုက်
ဒီ ဆယ်စုနှစ်တွေကြားမှာ ပြည်သူရဲ့အသံကိုလည်း နားထောင်ရမယ် ဆိုတဲ့စကား မကြားရတာ ကြာပါပြီ။
"We also have to listen to and understand the desires of ordinary people and respond to their wishes."
လက်တွေ့ ဒီမိုကရေစီ ကျကျ ကျင့်သုံးနိုင်ရေးမှာတော့ အားနည်းမှုတွေ ရှိနေသလို ပြည်သူရဲ့အသံကို နားထောင်ပြီး သူတို့ ဆန္ဒကိုလည်း လိုက်လျောရမယ် ဆိုတဲ့ စကားကိုလည်း ပြောထားခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူရဲ့ အသံဆိုရာမှာလည်း သန်း ခြောက်ဆယ်ကျော် လူထုကြီးဆီက မတူညီတဲ့ အသံတွေ၊ လိုအင် ဆန္ဒတွေ ကွဲပြားနေပါလိမ့်မယ်၊ ဒါကိုလည်း မေ့ မထားဘဲ နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ် အေးချမ်းဖို့၊ စီးပွားရေး တိုးတက်လာစေဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သွားရမှာပါ လို့ ဆိုထားပါတယ်။
၃။ ဦးသန်းရွှေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ။
" is someone who has been my boss in the past, someone I respect".
တစ်ချိန်က ကျနော့် ဘော့စ်၊ ကျနော် လေးစားရသူ လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ပြည်သူရဲ့ မေတ္တာ နဲ့ ယုံကြည် အားကိုးမှုကို ရယူလိုရင် ဒီ နာမည်ကို ထပ်တလဲလဲ ရွတ်နေလိုတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
၄။ ဘဝ နာခဲ့သူ
သမ္မတ ကြီး ကိုယ်တိုင်က ဆင်းရဲသား လူတန်းစား ဘဝကနေ တက်လာခဲ့ရတာမို့ အရောင် တဖိတ်ဖိတ် နေပြည်တော်က သမ္မတ အိမ်တော်မှာ စံနေရပေမယ့် အခြေခံ လူတန်းစားရဲ့ ဘဝ နဲ့ အခက်အခဲ ကိုလည်း မမေ့ဘူး ဆိုတာကို
"I experienced poverty, and that is not unrelated to my start, as President, to look at ways to reduce poverty "
၅။ ဒေါ်စုရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ နိုင်ငံရေး နဲ့ ဆက်စပ်နေပြီး နိုင်ငံရေးက ဒေါ်စု နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီ ပိတ်ဆို့မှုတွေကနေလွတ်အောင် ဒေါ်စုနဲ့ နားလည်မှုရအောင်ရယူပြီး အတူတကွ ပူးပေါင်းရေး စတင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း ပြောသွားခဲ့တယ်။
ဒီ စကားဟာ တာဝန် တစ်ဝက်ကို ဒေါ်စုဆီ မျှပေးလိုက်တာလို့ စစ်စစ် ပေါက်ပေါက် ကောက်ချက်ဆွဲရင် ရနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံ ရဲ့ လက်ရှိ ကံကြမ္မာ သူတို့ အပေါ်မှာ လုံးလုံး လျားလျား ရိုနေပါတယ်။ ဆင်းရဲသား ဘဝက လာခဲ့ကြတာချင်း တူပေမယ့် ဒီ ဘဝ တွေ အပေါ် နားလည်မှုမှာတော့ အခြား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ လုံးဝ မတူတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒေါ်စုက အဖိနှိပ်ခံ အကြည်ညိုခံ ဘဝကနေ နိုင်ငံရေးထဲ ရောက်လာပြီး သမ္မကြီးကတော့ ပြည်သူ့ ချဉ်ဖတ် အသိုင်း အဝိုင်းကနေ ရောက်လာခဲ့တာမို့ မတူညီတဲ့ အခက်အခဲတွေ ကိုယ်စီ ရှိကြတယ်ဆိုတာ ငြင်းဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ဆဲ ကာလမှာ ပါတီ နှစ်ပါတီ တင် မကပဲ ပြည်သူလူထုရဲ့ အခန်းကဏ္ဍလည်း အရေးကြီးကြောင်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဆောင်းပါးနောက်ပိုင်းကတော့ မနေ့ကကိစ္စ ကို ထပ်ဆွထားတာပါ၊ ပြုပြင် တည်ဆောက်ရေးမှာ စီးပွားရေး အဓိက ကျကြောင်း၊ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု မှာလည်း တားမြစ် ပိတ်ဆို့ထားတာတွေ မရှိမှ ထိထိရောက်ရောက် အလုပ် လုပ်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ဒီပလိုမက်တစ် ဆန်ဆန်လည်း ပြော၊ လက်တွေ့လည်း အလုပ်လုပ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင် ၂၀၁၅ ခု လောက်ဆိုရင် ဒေါ်စုနဲ့ နားလည်မှုတွေ၊ တာဝန်တွေ ခွဲဝေယူရုံတင် မကဘဲ ပြည်သူ့ မေတ္တာကိုတောင် ခွဲယူသွားကြလိမ့်မယ်လုိ့ အကောင်းကြည့် ကြည့် လိုက်မိပါတယ်။
“လူတော်လူကောင်းများရောက်သွားလျှင် ငရဲပြည်လည်း တိုး...
အေးဂျင့်များ က အသက်မပြည့်မီသော မြန်မာ အိမ်ဖော် မိန...
ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးပေါ် ဖြန့်ခင်းနေမိသည့် လူပြောသူပြေ...
ပွင့်သွားတဲ့ စွမ်းအင် တံခါး နဲ့ လူပြော သူပြော အသံမ...
အထားအသို မှားခဲ့တဲ့ စစ်တပ်နဲ့ အကျပ်အတည်း ကြားက သမ္မ...
ပွဲစဉ်ရဲ့အဖြေကို ပြောင်းလဲပစ်လာနိုင်တဲ့ .. မြန်မာ ...
✿ဝေးခဲ့ ပြီပန်းခရမ်းပြာ ✿
“Workaholic တဲ့လား၊ ၀ါး ဟား ဟား”
❀ပန်းခရမ်းပြာ ❀ ရာပြည့်၊ ခင်ဝမ်း၊ ကိုရဲလွင် (မဇ္စျိ...
★ ကားလမ်း ဥပဒေ ၂၀ ★
ကွန်ပျူတာနဲ့လူ တစ်သားတည်း ဖြစ်ခဲ့ရင် :)
အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ အားပြိုင်လာနေတဲ့ မြန်မာ (Myanma...
“ညောင်… ညောင် နဲ့ ဝုတ်….ဝုတ်”
One in Two ( or three?)
အမှန်တကယ် ပျော်ရွှင်ကြသူများ (၁)